အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏တော်လှန်ရေးရည်ရွယ်ချက်များအဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
စကျတငျဘာ ၂၈, ၂၀၁၆ - ၁၁:၅၃ ညနေ
News Code : 782122
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သခင်ကြီး၏ တော်လှန်ရေးရည်ရွယ်ချက်များကို သိရှိ နားလည်စေဖို့ အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံး အကိုးအကားမှာ အရာနှစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ပထမတစ်ခုမှာ သခင်(အ.စ)၏ မဒီနာရွှေမြို့တော်မှကရ်ဘလာ ရွှေမြို့တော် အထိ ခရီးတလျှောက်တွင် ဟောကြားတော်မူခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယတစ်ခုမှာ သခင်(အ.စ)နှင့် ပတ်သက်သည့် ဇေယာရတ်တော်များ ဖြစ်ပါ သည်။ဤအကိုးအကား နှစ်ခုဖြင့် ပြီးပြည့်စုံလာသည့် အာရူရာ တော်လှန်ရေးကြီး၏ အဓိက ရည်မှန်း ချက်၊ရည်ရွယ်ချက်(၁၀)ချက်ကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းမွန်မှုနှင့် ပက်သက်ပြီးလည်း အေမာမ်ဟိုစိုင်း(အ.စ)၏ ဩဝါဒတော်များတွင် လာရှိပေသည်။သခင်ကြီး၏ သာဝကတော်များအနေဖြင့် ဤ ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းမွန်မှုဘက်သို့ လမ်းညွှန်ပြခဲ့ပေသည်။ထို့ပြင် သခင်ကြီး၏ နောက်လိုက်၊နောက်သားများ လိုလားအချစ်၊မေတ္တာထားသူများအနေဖြင့်လည်း သခင်အတွက် ဇေယာရတ်(သ)များ ဖတ်ရွတ်ချိန်တွင် ဤရည်ရွယ်ချက်အကြောင်း ကို ရွတ်ဆိုကြပေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(အ.စ)အနေဖြင့် မိုဟမ္မဒ်ဟနဖီယေသို့ ရေးသားထားသည့် မိမိ သေတမ်းစာတွင် မိန့်တော်မူထားပါသည်။
အဓိပ္ပါယ်။။ကျွန်ုပ်တော်လှန်ရေး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကောင်းရာ၊ကောင်းမှုကို ညွှန် ကြားခြင်းနှင့် မကောင်းရာ၊မကောင်းမှုကို တားမြစ်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ကြည့်- ဗေဟာရွလ်အန်ဝါရ်ကျမ်း အတွဲ(၄၄)၊စာမျက်နှာ(၃၂၉)
ဟဇရတ်(သ)မွတ်စလင်ဗင်အကီးလ် ရဲရင့်၊ပြတ်သားပြီး သတ္တိ၊ဗျတ္တိရှိသည့် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ကိုယ်စားလှယ်တော် သံအမတ်၊ရှဟီးဒ်တော်များ၏ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း(အစ္စလာမ့်အစစ်)ရန်သူများနှင့် တိုက်ခိုက် ပြီး အဖမ်းဆီးခံရလေသည်။ပြီးနောက် ၎င်းအား အိုဗိုင်သွလ္လာဟ်ဗင်ဇေယာသ်ထံ ခေါ် ဆောင်သွားကြလေ၏။အမီးရ်ရေကူဖာ(ကူဖာမြို့ဝန်၊အာဏာပိုင်)အနေဖြင့် ဂျနာဗေ မွတ်စလင် ဗင်အကီးလ် သို့ပြောလေ၏။
”ငါအနေဖြင့် မင်းပြဿနာလုပ်ဖို့ မွတ်စလင်များအကြား သွေးခွဲ၊စည်းလုံးရေး ဖျက်ဖို့၊ကူဖာမြို့သို့ လာတယ်လို့ ကြားတယ်…”
ဂျနာဗေမွတ်စလင်ဗင်အကီးလ်အနေဖြင့် ၎င်းအား အဖြေပေးမိန့်လေ၏။
ما لِهذا آتَيْتُ، وَ لكِنَّكُمْ أَظْهَرْتُمُ الْمُنْكَرَ، وَ دَفَنْتُمُ الْمَعْرُوفَ... فَأَتَيْناهُمْ لِنَأْمُرَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَ نَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
အဓိပ္ပါယ်။။ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ပြဿနာလုပ်ဖို့ အတွက်လာခြင်း မဟုတ်ချေ။ဘာကြောင့် လာခဲ့ရသည်ဆိုလျှင် လူကြီးမင်းအနေဖြင့် မကောင်းမှု၊ဒုစရိုက်များကို ပြန့်ပွားစေခဲ့ပြီး၊ ကောင်းရာ၊ကောင်းမှုများကို မြှုပ်နှံခဲ့သည့် အတွက်ကြောင့် လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ….ကူဖာမြို့သူ၊မြို့သားများအား ကောင်းရာ၊ကောင်းမှုကို ညွှန်ကြားပေးပြီး၊မကောင်း ရာ၊မကောင်းမှုကို တားမြစ်ပေးရန် လာခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)နှင့် ပက်သက်ပြီးဇေယာရတ်(သ)တော်များမှ ဇေယာရတ်(သ)သေဝါရေဇ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဖတ်ရွတ်ရမည်မှာ
اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ اَقَمْتَ الصَّلاةَ، وَآتَيْتَ الزَّكاةَ، وَاَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَيْتَ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَاَطَعْتَ اللهَ وَرَسُولَهُ حَتّى اَتيكَ الْيَقينُ
အဓိပ္ပါယ်။။ကျွန်တော်အနေဖြင့် ကိုယ်တော်(အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ))သည် နမာဇ် မြဲမြံသူ၊ဇကားသ်ပေးဆောင်သူ၊ကောင်းရာ၊ကောင်းမှုကို ညွှန်ကြားပြသူ၊မကောင်းရာ၊ မကောင်းမှုကို တားမြစ်သူ၊ပြီးနောက် နောက်ဆုံးရှဟီးဒ်ဘွဲ့ကို ခံယူတော်မူသည့်အ ချိန်အထိ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်နှင့် အရှင်၏တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ အမိန့်ကိုနာခံ ကျင့်သုံးသူဖြစ်ကြောင်း သက်သေထွက်ဆို ပါ၏။
ဤအတွက်ကြောင့် မုချဧကန် ဟဇရတ်(သ)အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သခင် ၏ အရေးကြီးသည့် အာရှုရာတော်လှန်ရေး၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး မေ့ လျော့နေသည့် တာဝန်ဝတ္တရားနှစ်ခု(အမရ်ဗေမဟ်ရူဖ် ဝါနဟီးအဇ်မွန်ကရ်) ကောင်း ရာ၊ကောင်းမှုကို ညွှန်ပြခြင်းနှင့် မကောင်းရာ၊မကောင်းမှုကို တားမြစ်ခြင်းအား ပြန် လည်ရှင်သန်အောင် ပြုခြင်းလည်း ပါဝင်နေပေသည်။
ရှုထောင့်တစ်ခုအရ အမရ်ဗေမဟ်ရူဖ်ဝါနဟီးအဇ်မွန်ကရ်(ကောင်းရာ၊ကောင်းမှု ကိုညွှန်ကြားခြင်းနှင့် မကောင်းရာ၊မကောင်းမှုကို တားမြစ်ခြင်း)သည် သာသနာ့ တာ ဝန် ဝတ္တရားအားလုံးမှ အရေးကြီးဆုံး တာဝန်၊ဝတ္တရားတစ်ခုဖြစ်ပေသည်။
ဤအတွက်ကြောင့် အဖိုးတန်သည့် အေမာမ်အလီ(အ.စ)၏ ဟဒီးစ်တော်တစ် ပါးတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ဖတ်ရှုပါမည်။မိန့်တော်မူသည်မှာ-
وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ، عِنْدَ الاْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، إِلاَّ كَنَفْثَة فِي بَحْر لُجِّيٍّ
အဓိပ္ပါယ်။။(သတိရှိပါလေ။)ရှိသမျှ၊ကောင်းမှု၊သုစရိုက်၊ကုသိုလ်များအားလုံး ယုတ်စွ အဆုံး အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်၏ လမ်းတော်တွင် တိုက်ပွဲဝင်ခြင်း(ဂျေဟာဒ်)ဗင် အမရ်ဗေမဟ်ရူဖ်ဝါနဟီးမွန်ကရ်နှင့်ယှဉ်မည်ဆိုလျှင် ကျယ်ပြန့်လှသည့် ပင်လယ်ရေ နှင့် ရေစက်တစ်စက်ပမာ ဖြစ်ပေသည်။
ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ဤတာဝန်ဝတ္တရားနှစ်ခုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တိတိကျကျ၊နက် နက်၊ရှိုင်းရှိုင်း အခြေအနေ၊အစစ်အမှန်အတွက် သာဓက(ဥပမာ)တစ်ခု တင်ပြပါမည်။ (ကျေးဇူးပြု၍)ဂရုပြုပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ကြီးမားသည့် လယ်ယာတစ်ခု ရှိသည်ဟုမြင်ပါလေ။ဤလယ်ယာအတွက် ရှင် သန်၊ရပ်တည် နေရန်နှင့် အကျိုးအမြတ်ရှိရန်အတွက် အရာနှစ်ခု အရေးကြီး လိုအပ် ပေသည်။ပထမအရာမှာ စည်းစနစ်ကျပြီး ပြည့်စုံဖူလုံသည့် ရေအချိန်နှင့်အညီရနေ ရန် လိုအပ်ပေသည်။ဤသို့မရပါက သစ်ပင်များအားလုံး ခြံထွက်သည့် သီးနှံများအား လုံးခြောက်သွေ့ ပျက်စီးသွားပေမည်။
ဒုတိယဖက်တွင်(ခြံထွက်၊လယ်ထွက်)သီးနှံများအပေါ် ကျရောက်လာမည့် အန္တရာယ် အသွယ်သွယ်ကို တားဆီးကာကွယ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အမရ်ဗေမဟ်ရူဖ်(ကောင်းရာ၊ကောင်းမှုကို ညွှန်ကြားခြင်း)သည် ကြီးကျယ်ခမ်း နားသည့် သာသနာ့လယ်ယာ၊လယ်မြေအတွက် ရေအသွင်ကိုဆောင်နေပေသည်။ နဟီးအဇ်မွန်ကရ်(မကောင်းမှု၊မကောင်းရာကို တားမြစ်ခြင်း)အန္တရာယ်များကို ကာ ကွယ်ပေးခြင်း အသွင်ဆောင် နေပေသည်။
အကယ်၍ သာသနာ့လယ်ယာ၊လယ်မြေအတွင်း စည်းစနစ်ကျသည့် ရေအ ချိန်မှီ မစီစဉ်နိုင်လျှင် လယ်ထွက်သီးနှံများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားပေမည်။
ထိုနည်းတူစွာ အကယ်၍ လယ်ယာထွက် သီးနှံများ ၎င်းကို အန္တရာယ်အသွယ် သွယ်မှ မတားဆီး၊မကာကွယ်မည် ဆိုလျှင်(ကြိုးစားထားသည့်)လယ်ယာထွက်သီးနှံ များ တစ်ခုမျှ ကျန်ရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။
ဤသို့ဖြင့် အထက်ဖေါ်ပြပါ ရီဝါယတ်တော်အရ အမရ်ဗေမဟ်ရူဖ် ဝါနဟီးအဇ် မွန်ကရ်(ရှုထောင့်တစ်ခုအရ အဆိုတစ်ခုအရ)ဝါဂျစ်ဗ် အလုပ်များအားလုံးထက် ပိုပြီး အရေးကြီးကြောင်း ဆိုထားလေသည်။ဤအတွက် သက်သေအဖြစ် ဤအလုပ်နှစ်ခု (အမရ်ဗေမဟ်ရူဖ် ဝါနဟီးအဇ်မွန်ကရ်)မပါဘဲ ကျန်ဝါဂျစ်ဗ် အလုပ်များမှ ရလာဒ်ပေး မည် မဟုတ်ကြောင်း ဆိုလေ၏။
(စာရှုပရိတ်သတ်များ) သိထားကြသည့်အတိုင်း ရီဝါယတ်တော်များ ဖိုကာ အာ(မရ်ဂျယေသက္က်လီးတော်များ)၏ သောင်ဇီးဟွလ်မဆာအေကျမ်းများတွင် လာရှိ သည့်အတိုင်း အမရ်ဗေမအ်ရူဖ်ဝါနဟီးအဇ်မွန်ကရ် အဆင့်သုံးဆင့် လာရှိပေသည်။ ၎င်းအဆင့်(၃)ဆင့်အား ဂရုပြုရန် အရေးကြီးပေသည်။ရီဝါယတ်တော်များနှင့် ပတ် သက်ပြီး ဝစာအေလွရ်ှရှီအာကျမ်းအတွဲ(၁၁)၊အလ်အမရ်ဝါအန်နဟီး ကဏ္ဍအခန်း(၃) တွင် လေ့လာနိုင်ပေသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ နှလုံးသားအနေဖြင့် ကောင်းမှု၊ကောင်းရများအား ချစ်သူ၊ မေတ္တာရှိသူဖြစ်ပြီး မကောင်းရာ၊မကောင်းမှုများ အားမုန်းသူ၊ရန်သူ ဖြစ်ရပေမည်။
ကောင်းမှု၊ကောင်းရာကို တွေ့မြင်ချိန်တွင် ပျော်ရွှင်ပီတိဖြစ်မည်၊ဝမ်းသာမည် ဖြစ်ပေသည်။မကောင်းမှု၊မကောင်းရာများနှင့် ရင်ဆိုင်ရချိန်တွင် ဝမ်းနည်း၊သောက ဖြစ်လေသည်။
အကျဉ်းချုပ်၊အနှစ်ချုပ်ဆိုရလျှင် အတွင်းပိုင်း အခြေအနေ(နာမ်ပိုင်းအခြေ အနေသည်)ဤကောင်းမှုနှင့် မကောင်းမှု၊ကောင်းရာနှင့် မကောင်းရာကို တွေ့ကြုံရ ပြီးနောက် တစ်ထပ်တည်း မခံစားရခြင်းကို ဆိုလိုပေသည်။ဤအခြေအနေသည် အတွင်းပိုင်း၊နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ရပ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာပေလိမ့်မည်။
ကောင်းမှုများ၊ကောင်းရာများကို အတွင်းပိုင်း(နှလုံးသားဖြင့်)ချစ်ခြင်း၊မြတ်နိုး ခြင်းနှင့် မကောင်းမှုများ၊မကောင်းရာများကို နှလုံးသားဖြင့် မုန်းတီး၊ရွံရှာခြင်းကို နှုတ် ဖြင့်ထွက်ဆိုခြင်းဖြစ်ပေသည်။မကောင်းမှုများ၊မကောင်းရာများကို ပြုလုပ်သူများ၊ ကောင်းမှုများ၊ကောင်းရာများကို လျစ်လျူရှု၊ဂရုမပြုသူများအား မိမိ၏နှုတ်ဖြင့် အ ကယ်၍ ရန်ဖြစ်ခြင်း၊မာနတရားမရှိဘဲ၊သူတစ်ပါး၏ခံစားရမှုများကို ထိခိုက်အောင်ပြု ခြင်း မရှိဘဲ မိမိ၏ရှေ့ရှိသူအား သတိပေး၊အသိပေးနိုးဆော်မည်ဆိုလျှင် မုချဧကန် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို တွေ့ရလိမ့်မည် ဖြစ်ပေသည်။
အမရ်ဗေမအ်ရူဖ်ဝါနဟီးအဇ်မွန်ကရ်၏ တတိယအဆင့်ဆိုသည်မှာ လက်တွေ့ ကာယကံမြောက်ရသည့် အလုပ်ဖြစ်ပြီး၊အစ္စလာမ်မီအစိုးရ အာဏာပိုင်တို့၏အလုပ် ဖြစ်ပေသည်။
အကယ်၍ တစ်ဦး၊တစ်ယောက်(သို့)အများအနေဖြင့် ထင်ထင်၊ရှားရှား လူပတ် ဝန်းကျင် အသိုင်း၊အဝိုင်းတွင် မကောင်းမှုများ၊ပြစ်မှုဒုစရိုက်များကို ကျူးလွန်မည်၊ ကောင်းမှု၊ကောင်းရာများ၊ကောင်းမှု၊သုစရိုက်များကို မထီမျက်မြင်ပြုပြီး၊စော်ကားမည်၊ လက်လွတ်မည်၊ပြီးနောက် အခြားသူများ၏ အသိပေးပြောဆိုမှုကိုလည်း ဂရုမပြုမည် ဆိုလျှင် မလွဲမသွေ အစ္စလာမ်မီ၊အစိုးရ အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့အားဖမ်းချုပ် ခြင်း၊အပြစ်ပေးခြင်း တို့ကိုပြုပေမည်။
ဤအတွက်ကြောင့် ၎င်းတို့ကို လွတ်လွတ်၊လပ်လပ် ပေးနိုင်ခွင့်ကြောင့် အစ္စလာမ်မီ၊ဥပဒေများကို ပျက်စီး၊ထိခိုက်လာမည်ဆိုလျှင် ထိုသူအားဖမ်းဆီးချုပ် နှောင်မည် ဖြစ်ပေသည်။ကျွန်တော်အနေဖြင့် တစ်ဖန်ထပ်ပြီးရေးသားပါမည်။ဤ အ ဆင့်သည် သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် မဟုတ်ချေ။တစ်နည်းဆိုရလျှင်(အစ္စလာမ်မီ) အစိုးရနှင့် အာဏာပိုင်များ တာဝန်၊ဝတ္တရားဖြစ်ချေသည်။
(စာဖတ်ချစ်ပရိတ်သတ်များ) သိရှိထားသည့်အတိုင်း ကျွန်တော်အနေဖြင့် အ ရင်(စာမျက်နှာများတွင်)ဖေါ်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ဗနီအိုမိုင်ယာ အစိုးရလက်ထက်တွင် အထူးသဖြင့် ယဇီးဒ်(လ.န)၏အာဏာရှိစဉ်အချိန်တွင် နေရာတိုင်း၊အားလုံးမကောင်း မှုဒုစရိုက်ပြစ်မှုများ နေရာယူသွားခဲ့လေသည်။ယုတ်စွအဆုံး အစ္စလာမ့်တမန်တော် မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ ဗဟိုနန်းဆိုက်ရာ၊အာဏာတည်ရာ၊မဒီနာရွှေမြို့တော်တွင်လည်း မကောင်းမှု ဒုစရိုက်အမျိုးမျိုး၊ဟရမ်အလုပ်အမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် ပေကျံသွားရလေသည်။
မည်မျှထိဆိုလျှင် မဒီနာမြို့တော်သူ၊မြို့တော်သားများမှ အုပ်စုတစ်စုသည် အဆိုတော်အမျိုးသမီးများကို ကြိုဆိုရန် မြို့ပြင်ပအထိ သွားရောက်ခဲ့ကြလေသည်။ ပြီးနောက် ဤလုပ်ရပ်အတွက် အရှက်သိက္ခာမဲ့သည့်ဟုလည်း မခံစားခဲ့ကြချေ။ဒီ တော့ စာရှုသူအနေဖြင့် ကိုယ်တိုင်ဤ အကြောင်းအရာနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အကျယ် တဝင့် ဟဒီးစ်တော်ကို လေ့လာကြည့်ပါလေ။ပြီးနောက် အစ္စလာမ်မီဗဟိုဌာနချုပ်နှင့် ဝေးနေသည့် ကျန်မြို့များ၏ အခြေအနေကိုတွေးကြည့်နိုင်ပေသည်။သို့သော်လည်း ပဲ ဤကဲ့သို့သော် အရင်ဖေါ်ပြရေးသားထားသည့်အတိုင်း အခြေအနေများသည် သဘာဝဖြစ်ပေသည်။အကြောင်းမှာ အာဏာပိုင်များ၊အစိုးရအကြီးအကဲများအနေဖြင့် မိမိတို့ကိုယ် မိမိခလီဖွာ၊တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ ကိုယ်စားလှယ်တော်ခံယူထားပြီး ဂိုနာပေါင်းစုံ၊ပြစ်မှုဒုစရိုက်အစုံတွင် နစ်မြုပ်နေပါက သာမန်လူထုအား မည်ကဲ့သို့(လူ ကောင်း၊သူကောင်းဖြစ်လာဖို့)မျှော်လင့်ချက် ထားနိုင်ပါအံ့!
اِذَا كَانَ رَبُّ الْبَيْتِ بِالدَّفِّ مُولِعاً *** فَشِيمَةُ اَهْلِ الْبَيْتِ كُلُّهُمُ الرَّقْص
အဓိပ္ပါယ်။။မည်သည့် အိမ်ထောင်စု၏ အိမ်ထောင်ဦးစီးမဆို၊သီဆိုခြင်း၊ကခုန်ခြင်းတွင် အလွန်တရာ၊နှစ်သက်၊နှစ်မြို့လာမည်ဆိုလျှင် အိမ်သူ၊အိမ်သားများအားလုံးအနေဖြင့် လည်း ကခုန်ခြင်း၊သီဆိုခြင်းတို့တွင် နစ်မျောသွားပေမည်။
ဟုတ်ပေ၊မှန်ပေသည်။မကောင်းမှု၊ဒုစရိုက်များ၊ပြစ်မှုများသည် ကမ္ဘာအရှေ့ တိုင်းနှင့် အနောက်တိုင်းရှိ အစ္စလာမ်အားလွမ်းမိုးခဲ့လေသည်။ပြီးနောက် ကောင်းမှု သုစရိုက်များကို မေ့လျော့သွားကြချေပြီး၊သူတော်စင်၊သူတော်ကောင်းများ၊အေဗာ ဒသ် ဝတ်ပြုသူများ၊မိုဟာဂျေများ၊အန်ဆွာများ၊အာဏာပိုင်များနှင့် အဝေးသို့ရောက် သွားကြလေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အနေဖြင့် ဤကဲ့သို့အခြေအနေတွင် မိမိ၏တည်ရှိ နေမှုအားလုံး(နှလုံးသား၊နှုတ်၊ကိုယ်)ဖြင့် အမရ်ဗေမအ်ရူဖ် ဝါနဟီးအဇ်မွန်ကရ် တာ ဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့လေသည်။
အာရှုရာနေ့တွင် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အားခေါင်းပေါ်တင်ပြီး နှစ်ဖက် သောရဲမက်များအကြားတွင် ထားတော်မူပြီးလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ ဖိတ်ခေါ်နှိုး ဆော်ခဲ့တော်မူလေသည်။
အေမာမ်(အ.စ)အနေဖြင့် နှလုံးသားအဆင့်၊နှုတ်အဆင့်ဖြင့် လှုပ်ရှားမှုသည်အ ကျိုးမသက်ရောက်သည်ကို တွေ့တော်မူသည့်အခါ အဆင့်(၃)သို့ ဝင်ရောက်ရလေ ၏။
အဆင့်(၃)ဖြင့် ရန်သူသည် ချေမှုန်းပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ဤသို့ဖြင့်မကောင်း မှုဒုစရိုက်များ၊ပြစ်မှုများ ဆက်လက်ရှေ့ဆက်နိုင်မည် မဟုတ်တော့ချေ။
ပြီးနောက် အကယ်၍ဤအလုပ်ဖြင့်လည်း မဖြစ်နိုင်လျှင် မလွဲမသွေ၊စတေးမှု (ကုရ်ဗာနီပြုမှု)ကိုပေးရလေသည်။ပြီးနောက် ဤလှုပ်ရှားမှုကို အဆုံးတိုင်အောင် ပို့ ဆောင်ပေးရပေမည်။
ဟုတ်ပေသည်။မှန်ပေသည်။အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အနေဖြင့် မိမိ၏သွေး ကို ပေးဆပ်လှူဒါန်းပြီး၊ဤကြီးကျယ်လှသည့် တာဝန်ဝတ္တရားကို ကျေပွန်စွာ ထမ်း ဆောင်ခဲ့တော်မူလေသည်။ပြီးနောက် လူငယ်၊လူရွယ်အသက်ကို ရနေပြီးဖြစ်သည့် အစ္စလာမ့်အမည်ရှိ သစ်ပင်အတွက်ရေလောင်းသွားပေးခြင်းနှင့်၊၎င်းအပင်အား ပျက် စီးမှုမှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတော်မူခဲ့လေသည်။
အဗာအဗ်ဒွလ္လာဟ်အလ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)နှင့် ကိုယ်တော်၏သားတော်၊သမီး များ၊သာဝကတော်များ၏ သွေးသည်လည်း အစ္စလာမ့်တည်းဟူသည့် လယ်ယာအ တွက် ရေပမာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပေသည်။ထို့ပြင်အန္တရာယ်များမှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ပေးခဲ့လေသည်။
အကယ်၍ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အနေဖြင့် တော်လှန်ရေးမဆင်နွဲခဲ့မည် ဆိုလျှင် ဗနီအိုမိုင်ယာနှင့်၊ဂျဟေလီယသ်ခေတ်ကျန်များ၊အရှက်သိက္ခာမဲ့မည် မဟုတ် တော့ချေ။ထိုအချိန် အစ္စလာမ်အတွက် မည်သည့်(အန္တရာယ်)တွင်ကျရောက် သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း(စာရှုသူ)သိရှိနားလည်ပေမည်။အကယ်၍ရှိခဲ့မည်ဆိုလျှင်လည်း အန္တရာယ်ကျရောက်မှုကြောင့် သီးနှံကောင်းကောင်းမွန်မွန် မပေးနိုင်သည့် လယ်ယာ နှင်တူသွားပေမည်။
အရေးကြီးသည့် အစ္စလာမ့်သမိုင်းတွင် ကဏ္ဍာများမှတစ်ခုမှာ ဖြစ်ရပ်မှန်ကရ်ဗ လာပြီးနောက် တော်လှန်ရေးများပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။တော်လှန်ရေးများမှာ အနှိုင်းမဲ့သောင်ဝါဗီး(န)တော်လှန်ရေး၊မိုခ်သာတော်လှန်ရေး စသည်ဖြင့် ဤတော် လှန်ရေးများအားလုံး၏ ညာသံမှာ တစ်ခုတည်းဖြစ်ပြီး ထိုညာသံမှာ(لاِلِ مُحَمَّد اَلرِّضَا ) (အာလေမိုဟမ္မဒ်(အ.စ)၏နှစ်မြို့မှုအတွက်)ဖြစ်ပေသည်။
ကြည့်-ဗေဟာရ်အနဝါရ်ကျမ်း အတွဲ(၅၂)၊စာမျက်နှာ(၃၀၂)၊ဟဒီးစ်တော်အမှတ်(၄၆) နှင့် အခြားစာမျက်နှာ(၁၇၄၊၁၇၅၊၁၇၈နှင့်၁၉၉)
ယုတ်စွအဆုံး အဗူမွတ်စလင် ခိုရာစာန်နီအနေဖြင့်လည်း ဤညာသံဖြင့် လှုပ် ရှားတော်လှန်ခဲ့ပေသည်။ပြီးနောက် ဗနီအိုမိုင်ယာ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ဖျက် သိမ်းနိုင်ပြီး အောင်မြင်မှုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့လေသည်။
သို့သော်လည်းပဲ ၎င်းအနေဖြင့် အချုပ်အခြာအာဏာကို စစ်မှန်ပြီး(တရားမျှတ သည့်)ပိုင်ရှင်များထံ မလွဲအပ်သည့် အမှားအယွင်းကို ကျူးလွန်ခဲ့လေသည်။
အချုပ်အခြာအာဏာကို ဗနီအဘာစ်အားလွဲပြောင်းပေးခဲ့လေသည်။(သို့မ ဟုတ်)လွဲပေးဖို့ မဖြစ်မနေ အကြပ်အတည်း၊အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရလေသည်။
ဤအတွက်ကြောင့် အမရ်ဗေမအ်ရူဖ် ဝါနဟီးအဇ်မွန်ကရ်သည် အေမာမ်ဟို စိုင်း(န)(အ.စ)တော်လှန်ရေး၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှ တစ်ခုဖြစ်ပေသည်။သခင်အနေ ဖြင့်ဤရည်ရွယ်ချက်ကို ဆွတ်ခူးနိုင်ရန် မိမိ၏သွေးတော်ကို လှူဒါန်းပေးဆပ်ပြီး အောင်မြင်စွာ ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့လေသည်။ထိုတော်လှန်ရေး(အာရှုရာ)၏ အာနိသင်များ တဖြည်းဖြည်း၊တစ်ခုခြင်း ပေါ်ထွက်လာလေသည်။ပြီးနောက် အသိပညာကင်းမဲ့ သည့် လှုပ်ရှားမှုများ ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့လေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ ဩဝါဒတော်များမှ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အဇာဒါရီ များ ကျင်းပနေသည့်အပြင် ကောင်းမှု၊ကောင်းရာများ ညွှန်ကြားခြင်းကို ကျယ်ပြန့်စေ ရန် ဆောင်ရွက်ပေးပြီး၊မကောင်းမှု၊မကောင်းရာများကို ကုန်စင်အောင် တိုက်ထုတ် ပေးရမည်ဆိုသည့် မလွဲမသွေသမိုင်းပေးတာဝန်ဖြစ်ကြောင်းသင်ခန်းစာကိုမီးမောင်း ထိုးပြနေပါသလော?
ဧကန်မုချ မလွဲမသွေ နှစ်စဉ်၊နှစ်တိုင်း အဇာဒါရီ၏ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှုကို ကျယ်ပြန့်သထက် ကျယ်ပြန့်အောင် ကြိုးပမ်းသင့်ပေသည်။အကယ်၍ ကောင်းမှု၊ ကောင်းရာသုစရိုက်များကို မေ့လျော့သွားပြီး၊မကောင်းမှု၊မကောင်းရာဒုစရိုက်များကို တိုးပွားစေမည်ဆိုလျှင် ဆရက်ဒိုရ်ှရှိုဟဒါအေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ ရည်ရွယ်ချက် ကို မရောက်သေးကြောင်း ထင်ရှားနေပေသည်။
လက်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ ခေတ်ကာလတွင်လည်း အစ္စလာမ်တည်းဟူသော် လယ် ယာအတွက် ရေသွင်း၊ရေထည့်ပေးခြင်း၊ရေလောင်းပေးခြင်းဆိုသည့် ကောင်းမှု၊ ကောင်းရာများကို ညွှန်ကြားပေးခြင်း၊နှင့်အန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ပေးခြင်းအလုပ် ဆိုသည့် မကောင်းမှု၊မကောင်းရာများကို တားမြစ်ခြင်းသည် အရေးကြီးလိုအပ်ပေ သည်။
အကယ်၍ အရေးကြီး၊အဓိကအရာနှစ်ခုအား မေ့လျော့ခဲ့မည်ဆိုလျှင် အစ္စလာမ်မီ အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် အန္တရာယ်များနှင့်ပြဿနာများအဖြစ် အစ္စလာမ့် သာသနာတော် ဆန့်ကျင်ရေး၊ဝါဒီအနောက်တိုင်းများ၏ ခြိမ်းခြောက်မှု၊တိုက်ခိုက်မှုကို ခံရလိမ့်မည် ဖြစ်ပေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် ဟူရ်ဗင်ယဇီးဒ်ရေယာဟီ စစ်တပ်နှင့်ထိပ် တိုက် မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ပြီးနောက်၊ကရ်ဘလာကွင်းပြင်တွင် ရပ်နားပြီးခွသ်ဗာ တော်တစ်ခုအား ဖတ်ရွတ်တော်မူခဲ့လေသည်။ထိုခွသ်ဗာမှ ကဏ္ဍတော်တစ်ချို့တွင် ဤသို့မိန့်တော်မူထားလေသည်။
أَلا تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لا يُعْمَلُ بِهِ، وَأَنَّ الْباطِلَ لا يُتَناهى عَنْهُ، لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقاءِ اللهِ
အဓိပ္ပါယ်။။အို ကျွန်တော်၏ ဘက်တော်သားအပေါင်းတို့ခင်ဗျား၊အသင်တို့အနေဖြင့် အမှန်တရားကိုမေ့ပျောက်သွားကြပြီး အမှားမတရားမှုဟာ လူပတ်ဝန်းကျင်ကို သိမ်း ပိုက်ထားကြောင်း မမြင်ကြပါလော?ဤကဲ့သို့သော် အခြေအနေတွင် မိုမင်မနုဿလူ သားအနေဖြင့်(အမှန်တရားကို ရှင်သန်အောင်ပြုခြင်းနှင့် အမှားမတရားကို ရှင်းလင်း သုတ်သင်ခြင်းလမ်းတွင်)အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်နှင့် တွေ့ဆုံရန်(ရှဟီးဒ်အဖြစ်ခံယူ ရန်)အသင့်အနေ၊အထားတွင် ရှိနေရပါမည်။
အမှန်တရားနှင့် အမှားမတရားကို ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်တွင် အမှန်တရား နှင့် အမှားမတရားဆိုင်ရာ အဖြစ်အပျက်အကြောင်း အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)မှ ထို (အထက်ဖေါ်ပြပါ)ခွသ်ဗာတွင် လမ်းညွှန်ပြထားတော်မူပါသည်။ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ် အာန်၌(ဤအမှန်တရားနှင့် အမှားမတရားတို့ပတ်သက်နေသည့်)အဖြစ်အပျက်အား အပြည့်အစုံ၊အကျယ်တဝင့် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ကျွန်တော်အနေဖြင့် ၎င်းမှအချို့ဗဟို အချက်အချာကျမှုကို ညွှန်ပြပါမည်။
အမှန်တရားနှင့်အမှားမတရားတို့၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အကောင်းဆုံး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ အမှန်တရားနှင့်အမှားမတရား၏ပုံကို ဖေါ်ပြ တင်ပြနိုင်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ထို့အပြင် ဤဥပမာအတွက် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင် မြတ်အနေဖြင့် စူရာဟ် ရအ်ဒ် အာယတ်တော်အမှတ်(၁၇)တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ မိန့်ကြားတော်မူထားပါသည်။
أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَّابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَة أَوْ مَتَاع زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الاْرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الاْمْثَالَ
အဓိပ္ပါယ်။။အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်သည် မိုးကောင်းကင်မှ မိုးရွာသွန်းစေ၏။ထို အခါချောင်းလျိုတိုင်းနှင့်အညီ ရေများစီးထွေလာလေသည်။ပြီးနောက် ပြင်းထန်စွာရေ စီးဆင်းလာပြီး ရေကြီး၊ရေတက်လာပေသည်။(ထိုနည်းတူစွာ)လက်ဝတ်၊ရတနာများ (သို့)ဘဝအသုံးအဆောင်၊ပစ္စည်းများပြုလုပ်ရန် မီးချရလေသည်။အညစ်အကြေးများ ပြောင်သွားလေသည်။အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်အနေဖြင့် ဤနည်းအတိုင်း အမှန် တရားနှင့်အမှားမတရားကို ပုံနှိုင်း သာဓကပေးထားတော်မူလေသည်။နောက်ဆုံးအ ညစ်အကြေးများသည် အပြင်သို့ထွက် လာပေသည်။သို့သော် လူထုအတွက် အကျိုး ပြုသည့် အရာမှန်သမျှသည်(ရေ(သို့)သီးသန့်၊သတ္တု)သည် မြေပထဝီပေါ်ဝယ် ကျန်ရှိ ခဲ့လေသည်။အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်သည် ဤကဲ့သို့ ဥပမာများ၊ပုံနှိုင်းများပေး တော်မူလေသည်။
အထက်ဖေါ်ပြပါ အာယတ်တော်မှ မီးမောင်းထိုးပြနေပါသည်။အမှားမတရား သည်အခေါင်းပေါက်၊ခါလီဖြစ်ပေသည်။အသံသာအပြည့်ဖြစ်ပြီး၊အညစ်အကြေးနှင့် ရောထွေးကာ၊အကျိုးမဲ့၊ရလာဒ်မဲ့ ဖြစ်ပေသည်။အမှားမတရားမှု၏ သက်တမ်းသည် တိုတောင်းလှပေသည်။သို့သော်အမှန်တရားသည် အကျိုး၊အမြတ်၊ရလာဒ်အပြည့် ၊အဝ၊သန့်ရှင်း၊စင်ကြယ်၊သန့်စင်၊လှပပြီး ရှင်သန်မှုအတွက် အရင်းအနှီးနှင့် ထာဝရ ဖြစ်ပေသည်။အမှန်တရား၏ သက်တမ်းသည် ရှည်လျား၊ကြာမြင့်ပေသည်။မုချဧကန် အမှန်တရားနှင့် အမှားမတရား၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် လှလှပပနှင့် အသက်ဝင်ဆုံး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှ ဖေါ်ပြထားသည်။(ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ဆိုချက်)ထက် ပိုကောင်းသည့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် မရှိနိုင်ချေ။
စူရာဟ်ဟဂ်ျ အာယတ်တော်အမှတ်(၆၂)တွင် စကြဝဋ္ဌာအတွက် တွေးခေါ်စဉ်း စားရန် အတွက်လာရှိပေသည်။ဤအာယတ်တော်ပြီးနောက် အာယတ်တော်တွင် ဟက်ကေမိုသလက်(က)(ဘက်စုံ၊ထောင့်စုံမှ၊တုနှိုင်းမရသည့်အမှန်တရား)သည်သန့်ရှင်း၊သန့်ပြန့်၊စင်ကြယ်တော်မူသည့် ဇာတိတော်ပိုင်ရှင်သည် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် သခင်ဖြစ်ကြောင်းတင်ပြထားပေသည်။
ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيرُ
အဓိပ္ပါယ်။။ဤအရှင်မြတ်သည်သာလျှင် မုချဧကန် မှန်ကန်သော အလ္လာဟ်ဟိုအရှင် မြတ်ပင်တည်း။၎င်းမှအပ မည်သူကိုပင် ၎င်းတို့ဟစ်အော်၊တမ်းတသူများ၊အရများ သည် အမှားမတရား ဖြစ်ချေသည်။ဧကန်မုချ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်သည် အလွန်တရာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တော်မူသောအရှင်၊ကြီးမားတော်မူသည့်အရှင်ဖြစ် တော်မူပေသည်။
ဟုတ်ပါသည်။မှန်ပါသည်။လက်ရှိကမ္ဘာပေါ်တွင်(စကြဝဋ္ဌာတွင်)အရေးအကြီး တကာ့အကြီးဆုံး အမှန်တရားမှာ သန့်ရှင်း၊သန့်ပြန့်၊စင်ကြယ်တော်မူသည်။ဇာတိ တောပိုင်ရှင်မှာ်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင် ဖြစ်တော်မူပေသည်။မည်သည့် တည်ရှိ နေသည့်အရာမှန်သမျှ၊အရွယ်အစားမှန်သမျှ၊ပုံသဏ္ဍာန်မှန်သမျှ၊၎င်းတို့၏ဖန်ဆင်းရှင် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်နှင့် ဆက်သွယ်မှုနီးကပ်လေလေ၊အလ္လာဟ်ဟိုအရှင် မြတ်သခင်နှင့် နီးကပ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ထိုနီးကပ်မှုနှင့်အညီ အမှန်တရားဖြစ်ရပ်မှန်အစစ်ကို ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပေသည်။ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်သည် အမှန်တရားဖြစ်ပေသည်။
အကြောင်းမှာအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ ကလာမ်တော်(ဩဝါဒတော်များ)ဖြစ် သည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။တမန်တော်မြတ်များ(အ.စ)သည် အမှန်တရားဖြစ် ပေသည်။အကြောင်းမှာ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ဘက်တော်မှ စေလွတ်တော်မူခြင်းခံ ရသူများ ဖြစ်ကြပေသည်။စစ်မှန်သည့် အစ္စလာမ်မီအချုပ်အခြာအာဏာသည် အမှန် တရားဖြစ်ပေသည်။အကြောင်းမှာ ၎င်းဘက်မှအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ရှိတော်မူသည်။ ထို့ပြင် နှိပ်စက်၊ညှဉ်းပန်း၊သတ်ဖြတ်သူများ၊ယုတ်မာ၊ပက်စက်သူများ၊သူခိုးများ၊လော ကီမက်မောသူများ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပေသည်။ဤအရာများသည် အမှားမတရား များဖြစ်ပေသည်။အကြောင်းမှာ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်နှင့် ဝေးကွာနေပြီး၊အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ်မဟုတ်သူကို တမ်းတသည့်အတွက် ဖြစ်ပေသည်။
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အနေဖြင့် မက္ကာဟ်ရွှေမြို့တော်အား အောင်နိုင်တော် မူပြီး၊ကအ်ဗာဝတ်ကျောင်းတော်အတွင်း စံမြန်းတော်မူသည့်အချိန်တွင် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်သခင်ကြီး၏ အိမ်တော်အတွင်း မက္ကာဟ်ရွှေမြို့တော်အနီးအနားရှိ မျိုးနွယ် စုများ၏ ရုပ်ထု၊ဆင်းတု(၃၆၀)ရှိနေပေသည်။ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)သည် ၎င်းရုပ်ထု၊ ဆင်းတုတော်များကို တစ်ခုချင်းဆီ မိမိ၏လက်ကိုင်တုတ်ဖြင့် မြေပြင်ပေါ်သို့ ဆွဲချ တော်မူခဲ့လေသည်။ပြီးနောက် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် စူရာဟ်အာယတ်အမှန်
جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً
အဓိပ္ပါယ်။။အမှန်တရားရောက်လာချေပြီ၊အမှားမတရားပျက်စီး သွားချေပြီ။အ ကြောင်းမှာအမှားမတရားမှုသည် ပျက်စီးရမည့် အရာသာဖြစ်ပေသည်။
ဟုတ်ပေသည်။မှန်ပေသည်။သောင်ဟီးဒ်၊တစ်ပါးတည်းအတုမဲ့အရှင်ကို ခဝပ် ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်ခြင်းသည် အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံး အမှန်တကာ့အမှန် ဆုံး စကြဝဋ္ဌာ၏ ဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်ဖြစ်ပေသည်။ ဤသည် ဟက်(က)အမှန်တရား ဖြစ်ပေသည်။ရှေးရ်က်နှင့်ရုပ်ထု၊ဆင်းတုကိုးကွယ် ခြင်းသည်ဗာသွေလ်(ခ)အမှားမတရား ဖြစ်ပေသည်။ဤသို့ဖြင့် ဒဲဟ်ဟေဖဂ်ျရ် အင် ကေလာဗ်ဗေအစ္စလာမ်မီအီရန်(အေမာမ်ခိုမေနီ(ရ.ဟ))ပြင်သစ်မှ အီရန်သို့ပြန် ရောက်လာသည့်နေ့မှ လွတ်လပ်ရေးရသည့်အထိ ကြာမြင့်သည့်(၁၀)ရက်တာကာ လ)တွင် အထက်ဖေါ်ပြပါ အာယတ်တော်အား အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ထပ်ခါ၊ထပ်ခါ၊ ရွတ်ဆိုကြပေသည်။
အကြောင်းမှာ-ဗာသွေလ်(အမှားမတရား)အပေါ်တည်နေသည့် ရှိုင်တွာန်အ ချုပ်အချာ အာဏာပိုင်အစိုးရ ပြဿနာ(မကောင်းမှုကို)ပြန့်ပွားစေသည့် အစိုးရ၊အ လွန်တရာအရှက်မဲ့သည့်အလုပ်များ ကျူးလွန်သည့်အစိုးရ၊ပြည်သူဘဏ္ဍာငွေများကို စိတ်ကြိုက်ဖြုန်းခဲ့သည့်အစိုးရ ပြုတ်သွားကြပြီး၊ဟက်(က)(အမှန်တရား)ဖြစ်သည့် အစ္စလာမ်မီအစိုးရ၊အစ္စလာမ်မီအချုပ်အချာအာဏာ တက်လာလေသည်။ပြီးနောက် အစားထိုးနေရာ ယူခဲ့လေသည်။အစ္စလာမ်မီအစိုးရ၏ ကျောသား၊ရင်သား၊မခွဲခြားမှု များလာလေလေ၊ပြည့်စုံမှုများလာလေလေ၊အစ္စလာမ်သာသနာ့လမ်းစဉ်ကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးမှု ခြေလှမ်းတိုးလေလေ၊ထိုနည်းတူစွာ အညီအမျှ အမှန်တရားကိုလည်း ဆွတ်ခူးရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုခေတ်ကာလတွင် ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်း၌ မည်သည့်အမှန်တရားများ မေ့လျော့ခြင်းခံခဲ့ရပြီး၊၎င်းအမှန်တရားများနေရာ၊အမှားမတရားမှုများ နေရာယူခဲ့သ ဖြင့် မည်သည့်ဟက်(က)အမှန်တရားများကို ပြန်လည်ရှင်သန်စေဖို့နှင့် မတရားမှုအ မှားများကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းရန် အလို့ငှာ တော်လှန်ရေး ဆင်နွဲခဲ့ရပါသနည်း?
အဖြေ။။မြောက်များစွာသော နေရာများကို ဖေါ်ပြနိုင်ပါသည်။သို့သော် ဤအကျဉ်း ချုပ်၊အနှစ်ချုပ်ရေးသား တင်ပြနေသည့်(စာအုပ်)ဖြစ်ရာ(အကျယ်တဝင့်)တင်ပြရန် မဖြစ်နိုင်ချေ။လေးနေရာတည်းကိုသာဖေါ်ပြဖို့ တင်းတိမ် ကျေနပ်ရေးသားလိုက်ရပါ သည်။
သမိုင်းစာမျက်နှာ သက်သေထူနေပါသည်။ကျွန်တော် တင်ပြထားသည့်အ တိုင်း ဖြစ်ပါသည်။မိုအာဝေယာအနေဖြင့် အုပ်စုတစ်စုကို ဖွဲ့ထားပေးခဲ့ပါသည်။ထိုအဖွဲ့ မှာ ဆီးရီးယားမှ အီရတ်အေမာမ်အလီ(အ.စ)၏ အချုပ်၊အချာ အာဏာဗဟိုဌာနသို့ သွားရောက်ပြီး၊တိတ်တိတ်ပုန်း နယ်စပ်များတွင် လုယက်တိုက်ခိုက်၊ရက်စက်မှုကိုပြု ခဲ့ကြပေသည်။(နယ်စပ်ရှိပြည်သူလူထု၏)ပစ္စည်း၊ဥစ္စာများကို လုယက်ကြပြီးပြန်လှည့် သွားကြလေသည်။ဤသို့ပြုရခြင်းမှာ အီရတ်ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် အေမာမ်အလီ (အ.စ)၏ အချုပ်၊အချာ အာဏာအား အမြင်မကြည်အောင်၊မယုံအောင်၊မျှော်လင့် ချက်မရှိတော့အောင် ပြုခြင်းဖြစ်ပေသည်။အေမာမ်(အ.စ)၏လက်အောက်ရှိ ငြိမ်ဝပ်ပိ ပြား၊ငြိမ်းချမ်းနေသည့် ဒေသများကို မငြိမ်းချမ်း၊မငြိမ်သက်အောင် ပြုကြခြင်းဖြစ်ပေ သည်။
အပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုအား သတ်ဖြတ်ခြင်း၊မခုခံမကာကွယ်နိုင်သူများကို သတ် ဖြတ်ခြင်း၊မွတ်စလင်များ၏ ပစ္စည်း၊ဥစ္စာများကို လုယက်ခြင်း၊အစ္စလာမ်မီအချုပ်အချာ အာဏာ အုပ်ချုပ်နေသည့်အချိန်တွင် မငြိမ်သက်၊မလုံခြုံအောင်း စီစဉ်ခြင်း စသည်တို့ ထက်ပိုပြိး မတရားမှုများ၊အမှားများရှိသေးသည်ဟု တွေးနိုင်ပါသေးသလော?
မိုအာဝေယာအနေဖြင့် ပြည်သူပိုင်၊ဘဏ္ဍာငွေကို သုံးစွဲပြီး အမီးရွလ်မိုမေနီ ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)၏ အနီးအနားရှိ အီမာန်အားနည်းသူများ၊သတ္တိ၊ဗျတ္တိနည်း သူများကို(ကိုယ်ဘက်ပါလာရန်)ဝယ်ယူခဲ့လေသည်။အကြောင်းမှာ ဟဇရတ်(သ)အ လီ(အ.စ)အားတစ်ဦးတည်း၊တစ်ပါးတည်း အထီးကျန်ခဲ့စေရန် ဖြစ်ပေသည်။
မိုအာဝေယာအနေဖြင့်ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)အချုပ်၊အချာ၊အာဏာရှိနေသည့်အ ချိန်ကာလတွင် ကိုယ်တော်၏ အစိုးရအား အားနည်း၊အားပျော့စေရန်၊ တတိယ ခလီ ဖွာ အွစ်မန်၏ လုပ်ကြံ၊ခံရမှုကိစ္စဖြင့် ပြဿနာရှာခဲ့လေသည်။လူထုကိုကိုယ်တော်အား ဆန့်ကျင်၊သွေးဆောင်၊ဖြားယောင်းခဲ့လေသည်။တတိယခလီဖွာအားလုပ်ကြံသူ မျးကို ရှာဖွေပေးရန်၊ဖမ်းချုပ်ပေးရန်၊အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဂြိုလ်မွေခဲ့ လေသည်။
စစ်ဖီး(န)စစ်ပွဲ ဖြစ်ပွားရသည့် အခြေခံ၊အကြောင်းတရားများမှ တစ်ခုသည် လည်း(တတိယခလီဖွာ လုပ်ကြံ၊ခံရမှုကိစ္စ)ပါဝင်ပြီး ထောင်ပေါင်းများစွာ အသက်ဆုံး ရှုံး ခဲ့ရလေသည်။
ဤအတွက်ကြောင့် တတိယခလီဖွာအွစ်မန်၏ အကျီ င်္အားအလံအဖြစ်ထူခဲ့ သည်။အဖြစ်အပျက်မှာ သမိုင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင် ထင်ရှားကျော်ကြားလှပေသည်။ ဤအဖြစ်အပျက်ကို ဤ(စစ်ဖီး(န)စစ်ပွဲဖြစ်ရသည့် အကြောင်းအရာဖြင့်)ညွှန်ပြနိုင်ပေ သည်။
သို့သော် သမိုင်းစာမျက်နှာတွင် အံ့ဩစရာကောင်းသည့် အချက်မှာအေမာမ် အလီ(အ.စ)သည် ရှဟီးဒ်ဘွဲ့ခံယူပြီး၊အေမာမ်ဟစန်မိုဂ်ျသဗာ(အ.စ)အနေဖြင့်မတတ် နိုင်သည့်အဆုံး မိုအာဝေယာကို ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်တော်မူခဲ့ရပေသည်။ပြီးနောက်မို အာဝေယာအနေဖြင့် အချုပ်၊အချာ၊အာဏာတစ်ခုလုံးကို ချုပ်ကိုင်သွားခဲ့လေသည်။ ပြီးနောက် တစ်ဦး၊တစ်ယောက်တည်း အစ္စလာမ်မီအာဏာရှင် ဖြစ်ခဲ့လေသည်။(ထို အချိန်တွင်)လုံးဝတတိယခလီဖွာအွစ်မန် လုပ်ကြံ၊ခံရမှုကိစ္စကို လုံးဝမယူလာတော့ ချေ။တစ်နည်းဆိုရလျှင် လုံးဝအသတ်မခံခဲ့ရသည့် ပုံစံဖြင့် နေခဲ့လေသည်။
ဟုတ်ပေသည်။မှန်ပေသည်။(မိုအာဝေယာသည်)မိမိ၏ မကောင်းသည့်ရည် ရွယ်ချက်များကို လက်ဝယ်ရယူနိုင်ရန် တရားဝင်သည်ဖြစ်စေ၊မဝင်သည်ဖြစ်စေ၊အမှီ သဟဲအဖြစ်သုံးခဲ့လေသည်။ယုတ်စွအဆုံး အကယ်၍ ဤလမ်းအတွက် အချို့အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများကို စွပ်ပဲစွဲရ၊စွဲရ၊ထောင်ပဲချရ၊ချရ၊သတ်ပဲ၊သတ်ရ၊သတ်ရ ၎င်းအဖို့အရေးမ ကြီးတော့ချေ။
အားလုံးအသိပင်၊ယဇီးဒ်(လ.န)ဗင်မိုအာဝေယာသည် ပြဿနာရှာသူ၊ပျက်စီး သူ၊ပြစ်မှု၊ဒုစရိုက်၊ကျူးလွန်သူ၊သန့်ရှင်း၊သန့်ပြန့်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊အပြစ်မဲ့လူသားများ ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ၊အရက်သေစာ၊သောက်စားသူ၊လောင်းကစားလိုက်စားသူ၊မ ကောင်းမှုဖြင့် စွန်းညှိနေသူ ဖြစ်ပေသည်။
မိုအာဝေယာအနေဖြင့် ဤကဲ့သို့သော် ပုဂ္ဂိုလ်အားမွတ်စလင်များ၏ ခလီဖွာ သမ္မတအဖြစ်နှင့် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ ကိုယ်စားလှယ်တော်အဖြစ် မိမိ၏ နောက်အတွက် နေရာပေးခဲ့လေသည်။
ဤအမှားသည် အမှားသေးသေးလေးဖြစ်ပါသလော? အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န) (အ.စ)သည်ဘဝတည်ဆောက်တော်မူခဲ့သည့် ကာလတွင် အစ္စလာမ်အသိုင်းအဝိုင်း တစ်ခုလုံးသည် အမှားမတရားအနေဖြင့် သိမ်းပိုက်ထားခဲ့လေသည်။အမှန်တရားအား မေ့လျော့ပစ်ခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပေသည်။ထိုအတွက်ကြောင့် အေမာမ်(အ.စ)အနေဖြင့် တော်လှန်ရေး ဆင်နွဲခဲ့ရလေသည်။အကြောင်းမှာ အမှန်တရားကို ပြန်လည်ရှင်သန် စေပြီး ပတ်ဝန်းကျင်၊အသိုင်းအဝိုင်းတွင် အမှားမတရားကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းရန် အ လို့ငှာ ဖြစ်ပေသည်။
ဤလမ်းစဉ်နှင့် ဤရည်ရွယ်ချက်ကို အရယူဆွတ်ခူးနိုင်ရန် အလို့ငှာ မည်သည့် တန်ဖိုး၊အဖိုးအခကို ဖြစ်စေ ပေးဆပ်ဖို့ အသင့်ရှိတော်မူခဲ့လေသည်။
လေးစားအပ်ပါသော စာဖတ်သူအပေါင်းတို့….ချစ်ခင်လေးစားရပါသော အဇါ ဒါရီပြုလုပ်သူများခင်ဗျား၊….အဇါဒါရီအား မလွဲမသွေ အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းဖြင့် ပြုလုပ်ပါလေ။နှစ်စဉ်၊နှစ်တိုင်း ပြည့်စုံသည်ထက်ပြည့်စုံစွာ၊ကျယ်ပြန့် သညထက် ကျယ်ပြန့်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီစဉ်ရပေမည်။ကြိုးပမ်းရပေမည်။ထိုမှ သာ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ လက္ခဏာတော်များကို လေးစား၊အရိုအသေပြုဆို သည့်အဓိပ္ပါယ်ကို အမှန်တကယ် ဆောင်ရွက်ရာရောက်သွားပေမည်။
သို့သော်လည်းပဲ အဇါဒါရီပြုသည့်(မိုမေနီ၊မိုမေနာ)တိုင်း အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န) (အ.စ)အနေဖြင့် အမှန်တရားကို ရှင်သန်အောင်ပြုရန် အမှားမတရားကို သုတ်သင် ရှင်းလင်းရန် တော်လှန်ရေး၊ဆင်နွဲခဲ့ကြောင်းသိထားရပေမည်။ထိုမှသာဤလမ်းစဉ် အတွက် ရှေ့ဆက်ခြေတက်နိုင်မည် ဖြစ်ပေသည်။
ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်(အချိန်တိုင်း)၊နေရာတိုင်းတွင်အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န) (အ.စ)၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို သိထားမည်ဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့၏ အနီးတကာ့အနီး ကပ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နှင့် တစိမ်းအကြား၊ကွဲလွဲမှုဖြစ်ပေါ်လာပါကလည်း ဟက်(က)အမှန်တ ရားသည် တစိမ်းဖက်က ဖြစ်နေမည်ဆိုလျှင် ခင်မင်မှု၊နီးစပ်မှုထက် ဥပဒေ၊တရားမျှ တမှုကို ဦးစားပေးပြီး ဟက်(က)အမှန်တရားဘက်မှ(၎င်းတစိမ်းဘက်မှ)ရပ်တည်ပေး ရပေလိမ့်မည်။
အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားသူကြီးများအနေဖြင့် မက်သဗ်ဗေအာရှုရာမှ သင် ခန်းစာယူထားမည်ဆိုလျှင် မည်သည့်ကွဲလွဲမှုအတွက် ဖြစ်ပါစေ၊အသေးတကာ့၊အ သေးဆုံးဟက်(က)အမှန်တရားနှင့်ဆန့်ကျင်ဖက် အမိန့်ထုတ်ပြန်မည် မဟုတ်ချေ။ ယုတ်စွအဆုံး မည်သည့် ခြိမ်းခြောက်မှု ဖြစ်စေ(သို့)လာဘ်ပေး၍ဖြစ်စေ၊အမှန်တရား ၏ဆန့်ကျင်ဖက် အမိန့်ပေး၍ ရမည်မဟုတ်ချေ။
အကယ်၍တစ်ခါတလေ ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမည်။အစ်ကိုများ၊မောင်များအနေ ဖြင့် အစ်မများ၊ညီမမျး၏ ရပိုင်ခွင့်အမွေကို ၎င်းတို့အားမပေးဘဲစားသုံးခဲ့မည်ဆိုလျှင် (သို့)အစ်ကိုကြီးမှ ညီငယ်များ၏ ရပိုင်ခွင့်အမွေကို မပေးမည်ဆိုလျှင်အေမာမ်ဟို စိုင်း(န)(အ.စ)၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို မသိရှိ၊မနားလည်၊သဘောမပေါက်သေးသည့် အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။
အလုပ်ခိုင်းသူ တစ်ဦး၊တစ်ယောက်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏တော် လှန်ရေး ရည်ရွယ်ချက်များကို သိရှိနားလည်မည်၊ပြီးနောက်အေမာမ်အပေါ်အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ် စေလွတ်တော်မူသည့် အေမာမ်ဟု သက်ဝင်ယုံကြည်မည်ဆိုလျှင်လုံးဝ ဧကန်မလွဲ မိမိအလုပ်သမားများ၏ လုပ်အားခကို မည်မျှပင်များသည်ဖြစ်စေ၊နည်း သည် ဖြစ်စေ၊မပေးဘဲနေမည် မဟုတ်ချေ။(ပေးကိုပေးမည်)မိမိကိုယ်အား အလုပ်သ မားများကို ဆပ်ဖို့ကျန်နေသည့် အကြွေးရှင်အဖြင့် အဖြစ်ခံမည် မဟုတ်ချေ။
ဟုတ်ပါသည်။မှန်ပေသည်။ကျွန်တော်တို့(ရှီအာအေမာမ်မီယာ)အနေဖြင့်ကိုယ် တော်၊ရှိုဟဒါများ၏ဦးသျှောင် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏တော်လှန်ရေးအား သိလာ လေလေ၊နားလည်လာလေလေ၊ထိုသိရှိနားလည်မှုနှင့်အညီ(မိမိတို့ဘဝ၏ နေ့စဉ်၊နေ့ တိုင်း တည်ဆောက်မှုတွင် လက်တွေ့ကျလေလေ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။အကောင်အ ထည်ဖေါ်လေလေ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
သတိ-အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အများစု နေထိုင်သည့် တိုင်းပြည်များအတွက်သာ ဆိုလိုပေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သခင်၏ တော်လှန်ရေးသည် အလွန်တရာအရေး ကြီးဆုံးရည်ရွယ်ချက်များမှ တစ်ခုမှာအစ္စလာမ်မီအစိုးရအား တည်ထောင်ရန်လည်း ဖြစ်ပေသည်။ဤဆွေးနွေးမှုတွင် အစိုးရတည်ထောင်ရန် အရေးကြီးမှုနှင့် ပတ်သက် သည်များကို ခြုံငုံထားသည့်ဆွေးနွေးမှုအား တင်ပြရန် အရေးကြီးလိုအပ်ပေသည်။
အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်၏ တမန်တော်မြတ်များ(အ.စ)အားလုံးသည် ရည်ရွယ်ချက်များရှိပေသည်။ထိုရည်ရွယ်ချက်များကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်အတွက် တာဝန်၊ဝတ္တရားရှိပေသည်။ဤလုပ်ရပ်အတွက် လက်တွေ့ကာယကံမြောက် အချုပ်၊ အချာအာဏာပိုင်ကို မတည်ထောင်မခြင်း မဖြစ်နိုင်ချေ။အကယ်၍ဖြစ်မည်ဆိုလျှင် လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပေမည်။
သာဓကအားဖြင့် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်တွင် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ တမန်တော်များရည်ရွယ်ချက် များကို ဖေါ်ပြထားပါသည်။ထိုရည်ရွယ်ချက်များမှာ သအ်လီးမ်(ပို့ချမှု)၊သရ်ဘီယသ်(သွန်သင်မှု)၊မတရားမှု၊ညှဉ်းပန်း၊ရက်စက်မှုကိုတော်လှန်ရန်၊လူမှုရေးရာကျောသား၊ ရင်သားမခွဲခြားမှု၊လူသားများအား ကျေးကျွန်အဖြစ်မှ လွတ်မြောက်ရန်ဆောင်ရွက် ပေးမှု၊အနှိပ်စက်၊အညှဉ်းပန်း၊အနိုင်ကျင့်ခံရသူများကို ၎င်းတို့၏ရပိုင်ခွင့်များပြန်လည် ရယူပေးရန်၊စိတ်ဓာတ်များကို ပဲ့ပင်၊သွန်သင်ပေးခြင်း နှင့် ကောင်းမြတ်၊မြင့်မြတ်သည့် စာရိတ္တတော်များကို ပျိုးထောင်ပေးရန်တို့ ဖြစ်ပါ သည်။
ဤရည်ရွယ်ချက်များအား အစ္စလာမ်မီအချုပ်၊အချာအာဏာရှင်အစိုးရ မတည် ထောင်မခြင်း ကျယ်ကျယ်၊ပြန့်ပြန့်၊တိုးတက်စည်ပင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည် မဟုတ် ချေ။
အကြောင်းမှာ-ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် တိုင်းပြည်တပြည်တွင် ဘဝတည် ဆောက်မည်၊သို့သော် အုပ်ချုပ်မှုအာဏာသည် ကျွန်ုပ်တို့(မွတ်စလင်များ)လက် တော်တွင်လည်း မရှိချေ။ထိုအချိန်အခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ပညာပေးနည်းစနစ် များနှင့် သွန်သင်ပဲ့ပင်မှုများကို အစ္စလာမ်သာသနာတော်အရ တည်ဆောက်လိုသည့် ဆန္ဒ၊အာသီသရှိမည်ဆိုလျှင် တင်းပြည့်၊ကျပ်ပြည့် ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။
အကယ်၍ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များနှင့် ပုံနှိပ်တိုက်များ၊ကျွန်တော်တို့လက် ထဲတွင် မရှိမည်၊ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များ၊အေမာမ်ဘာရာများတွင် မျိုးဆက်သစ်လူ ငယ်၊လူရွယ်များကို ပညာပေးရန်၊ပဲ့ပင်၊သွန်သင်ရန် မင်ဘဲရ်တစ်ခုတည်းကိုသာလျှင် အသုံးပြုမည်ဆိုရင် လုံလောက်ဖူလုံလိမ့် မဟုတ်ချေ။
အချို့ပြောကြပေသည်။ယခုခေတ်အချိန်၊အခါတွင်လည်း အစ္စလာမ်မီနိုင်ငံထူ ထောင်ပြီးပီ ဖြစ်သော်လည်းပဲ မကောင်းမှုများ မနည်းသွားချေ။သို့သော်လည်းပဲ ၎င်း တို့အနေဖြင့် အချက်တစ်ချက်ကို မေ့နေလေသည်။အကယ်၍အစ္စလာမ်မီတော်လှန် ရေး မပေါ်ပေါက်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် အစ္စလာမ်မီအချုပ်၊အချာအာဏာရှင်အစိုးရကို မ တည်ထောင်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် ဘာဖြစ်သွားခဲ့မည်နည်း အကယ်၍ ဒုစရိုက်များ၊မကောင်း မှုများကို ပြုလုပ်သည့် မကောင်းသည့်အစိုးရ၊ပဲဟ်လစီအစိုးရ၊ရှားအစိုးရ(အစ္စလာမ် အမည်ခံအစိုးရ)ထိုအတိုင်းရှိနေမည်ဆိုပါက အိမ်တိုင်း၊အိမ်တိုင်း(မကောင်းမှု၊ဒုစရိုက် ညစ်ညမ်းမှုများ၊စာရိတ္တပျက်ပြားမှုများကို အများအပြားနှင့် ပြည့်နှက်နေသည့်)စ လောင်းလိုင်းများနေရာယူထားပြီး ဖြစ်နေခဲ့ပေမည်။မကောင်းသည့်ဆိုဒ်များ၊အား လုံးလက်ထဲတွင်(လွတ်လပ်စွာ)ရှိနေပေမည်။မိုဘိုင်းများ၊sms များ၊ဗလူးတို့စ်များဖြင့် ပြန့်နှံ့နေသည်။မကာင်းမှု၊ဒုစရိုက်များကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မည် မဟုတ်ချေ။ရုပ်မြင်သံ ကြားအစီအစဉ်များအားလုံးနှင့် အခြားသတင်းဌာနများတွင်လည်း မကာင်းမှုများ၊ဒုစ ရိုက်မှုများ၊ညစ်ညမ်းမှုများကို ထုတ်လွှင့်နေမည် ဖြစ်ပေသည်။
အတိုချုပ်၊အနှစ်ချုပ်ရေးသားရမည်ဆိုလျှင် မကာင်းမှုများ၊ဒုစရိုက်မှုများ၊ညစ် ညမ်းမှုများ လေးဖက်၊လေးတန်ကို လွှမ်းမိုးနေမည်ဖြစ်ပြီး ဒီး(န်)သာသနာဆိုသည့် သတင်းပင်ရှိမည် မဟုတ်ချေ။
မှတ်ချက်။။ပြည်ထောင်စုအစ္စလာမ်မီ အီရန်နိုင်ငံတွင် စလောင်းလိုင်းများတပ်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ မကောင်းသည့် ဆိုဒ်များကြည့်ရှုခွင့် စသည်တို့ကို လုပ်ခွင့်မရှိချေ။တွေ့ ရှိခဲ့လျှင် တရားဝင်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကို သက်ဆိုင်ရာမှ ဦးဆောင်ပြီး၊ဆောင် ရွက်နေပါသည်။ဘာသာပြန်ဆိုသူ
အထက်ဖေါ်ပြပါ ရေးသားမှုအတွက် သက်သေအထောက်အထားဖြင့် ရေး သားသီကုံးရမည်ဆိုလျှင်…အစ္စလာမ်တော်လှန်ရေး(အီရန်နိုင်ငံတွင်)မအောင်မြင် မည်အလျှင်အချိန်အခါတွင် မကာင်းမှုများ၊ဒုစရိုက်မှုများ၊ညစ်ညမ်းမှုများ အားလုံး၏ အကြောင်းခံများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပြည်သူလူထု၏ လက်ဝယ်တွင် မရှိချေ။
သို့သော်လည်း မည်မျှအထိ ညစ်ညမ်းနေသည်ကို ဆိုရမည်ဆိုလျှင် နေရာ အားလုံးကို လွှမ်းမိုး၊ချုပ်ကိုင် ထားခဲ့လေသည်။လက်ရှိအခြေအနေခေတ်အရ မကောင်းမှုများ၏အကြောင်းခံများ(စလောင်း၊ဆိုဒ်စသည်)သာ(ထိုအချိန်က)ရှိခဲ့မည် ဆိုလျှင် မည်သည့်အခြေအနေသို့ ရောက်သွားခဲ့မည်နည်း?
အကယ်၍ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊အများနှင့်ဆိုင်သည့် တရား မျှတမှု၊ကျောသား၊ရင်သားမခွဲခြားမှုကို လက်တွေ့ကျကျ အကောင်အထည်ဖေါ်လို လျှင် အစ္စလာမ်မီအချုပ်အချာ၊အာဏာအစိုးရ မထူထောင်ပဲ မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့် မည်နည်း?
မက်စ်ဂျစ်ဒ်များ၊အေမာမ်ဘာရာများအတွင်း သွန်သင်၊ဆုံးမမှုများ၊ဆုံးမတရား တော်များဖြင့်သာလျှင် လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊အများနှင့်ဆိုင်သည့် တရားမျှတမှု၊ကျောသား၊ ရင်သားမခွဲခြားမှုကို ပြဌာန်းနိုင်မည် ဖြစ်ပါသလား?
ဥပဒေကို ပြဌာန်းနိုင်ရန် စွမ်းအား၊လူထုအားမကောင်းမှု၊ဒုစရိုက်များ၊ညစ်ညမ်း မှုများမှ ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် အကြောင်းခံများ၊တန်ဆာကိရိယာများ(ရဲစခန်း၊ရဲစသည် ဖြင့်)၊ပြစ်မှု၊ဒုစရိုက်ကျူးလွန်ထားသည့် ရာဇဝင်သားကောင်များ၊စီးပွားရေးအမြတ်ကြီး စားပြုသည့် ခေါင်းပုံဖြတ်သမားများကို အပြစ်ပေးစီရင်ခြင်းမှအပ၊အနှိပ်စက်၊အနိုင် ကျင့်၊အညှဉ်းပန်း၊သတ်ဖြတ်ခံရသူများ၏ ရပိုင်ခွင့်ကို ဇွာလေမ်များ(နှိပ်စက်၊ညှဉ်းပန်း၊ အနိုင်ကျင့်၊သတ်ဖြတ်သူများ)ထံမှ ပြန်လည်ရယူခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါလား?
ဤအတွက်ကြောင့် သာသနာနှင့် နိုင်ငံရေးသည် သီးသန့်ဖြစ်ပါသည်။ကြွေး ကြော်ခံယူနေသူများသည်(စစ်မှန်၊မှန်ကန်သည့်)နိုင်ငံရေး၊အဓိပ္ပါယ်ဆိုလိုခြင်းကို မသိနားမလည်ခဲ့သူများ သာသနာ၏အစီအစဉ်များ၊မသိနားမလည်ခဲ့သူများ ဖြစ်ပေ သည်။
ဟုတ်ပါသည်။မှန်လှပေသည်။သာသနာတော်၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှ တစ်ခု ဖြစ်သည့် ပုဂ္ဂလိက ကိစ္စ၊သာဓကအားဖြင့် နမာဇ်နှင့် ရိုဇာစသည့်ဖြင့်(အစ္စလာမ်)အစိုး ရမတည်ထောင်ပဲ ပြုနိုင်ပေသည်။(သို့သော်ဤလုပ်ဆောင်မှုများသည်လည်း စည်ပင် စွာအစိုးရမတည်ထောင်ပဲ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်မဖြစ်နိုင်ချေ။)
သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် အစ္စလာမ်သာသနာသည် လူမှုရေးရာဆိုင် ရာ၊ဥပဒေသများ အမြောက်အများကို ပြဌာန်းထားသည့် သာသနာဖြစ်ကြောင်းကို နားလည်ထားပါသည်။
ဤဥပဒေသများကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ဘာသာရေးဆိုင်ရာအစိုးရအား တည်ထောင်ရန် အရေးကြီးလိုအပ်ပါသည်။
ဤအတွက်ကြောင့် မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည် မဒီနာရွှေမြို့တော် သို့ ဟေဂျရသ်ထွက်တော်မူသည့်အချိန်ပြီးနောက် အစ္စလာမ်ရန်သူများ၏ မကောင်းမှု အန္တရာယ်မှ အေးငြိမ်းခဲ့လေသည်။ထိုနောက် ပထမဦးစွာမိမိ၏ရည်ရွယ်ချက်များ (အစ္စလာမ်ရည်ရွယ်ချက်များ)ကို လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖေါ်ဆောင်နိုင်ရန်အ တွက် အစ္စလာမ်မီအစိုးရ၊အချုပ်အချာ၊အာဏာကို ထူထောင်တော်မူ ခဲ့လေသည်။
အေမာမ်မိုဟမ္မဒ်ဘာကေရ်(အ.စ)သည် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလှသည့် ဟဒီးစ် တော်တစ်ခုလာရှိပေသည်။မိန့်တော်မူသည်။
အဓိပ္ပါယ်။။အစ္စလာမ်သာသနာ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်(၅)ခုရှိပါသည်။နမာဇ်၊ဇကားသ်၊ ဟဂ်ျ၊ရိုဇာနှင့် ဝေလာယသ်တို့ဖြစ်ပါသည်။ဇိုရာရဟ်အနေဖြင့် မေးမြန်းလေ၏။မည် သည့်အခြေခံအုတ်မြစ်သည် ဤအခြေခံအုတ်မြစ်များအနက် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါ သနည်း? အေမာမ်(အ.စ)အဖြေပေးမိန့်တော်မူလေ၏။ဝေလာယသ်ဖြစ်ပေသည်။အ ကြောင်းမှာ ကျန်အရာအုတ်မြစ်များ၏(အောင်မြင်မှု)သော့ချက်ဖြစ်ပေသည်။ထို့ပြင် ဝါလီ(ခ)အုပ်ထိန်းသူ(အစ္စလာမ်မီအာဏာရှင်)သည် ဤအခြေခံအုတ်မြစ်များကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်နိုင်ရန် သက်သေ(လမ်းညွှန်ရှင်)ဖြစ်တော်မူ ပေသည်။
ကြည့်-ကာဖီကျမ်းအတွဲ(၂)၊အခန်းအလ်အီမာန်ဝလ်ကူဖ်ရ်၊ကဏ္ဍတော် ဒိုအာအေမိုလ် အစ္စလာမ်
اَللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَا كَانَ مِنَّا تَنافُساً فِي سُلْطان، وَلا الْتماساً مِنْ فُضُولِ الْحُطامِ، وَلكِنْ لِنُرِىَ الْمَعالِمَ مِنْ دِينِكَ، وَنُظْهِرَ الاْصْلاحَ فِي بِلادِكَ، وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبادِكَ، وَيُعْمَلُ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَّتِكَ وَأَحْكامِكَ
ယေဘုယျအားဖြင့် လေးစားအပ်ပါသော စာရှုပရိတ်သတ်ကြီးသည် ဓမ္မကတိ ကများ၏ဟောကြားမှု ကို နားထောင်ဖူးပေမည်။ထိုဟောကြားမှုများမှာ အေမာမ်ဟို စိုင်း(န)(အ.စ)ကရ်ဗလာ သို့ကြွမြန်းတော်မူချိန်တွင်ကူဖာမြို့မှ မဒီနာရွှေမြို့တော် သို့ပြန်နေသည့် ဖရဇ်ဒက်(သို့မဟုတ်)အခြားပုဂ္ဂိုလ်နှင့် တွေ့ဆုံချိန်တွင် ကူဖာမြို့အ ခြေအနေအား မေးမြန်းလေ၏။အဖြေပေးသည်မှာ -
قُلُوبُ النّاسِ مَعَكَ وَأَسْيافُهُمْ مَعَ بَني أمُيَّة
အဓိပ္ပာယ် ။ ။ ပြည်သူလူထု၏ နှလုံးသားသည် ကိုယ်တော်နှင့်အတူ ရှိနေပြီး ၎င်းတို့ ၏ ဓားရှည်များမှာ ဗနီအိုမိုင်ယာနှင့်အတူ ရှိနေပါသည်။
သို့သော် ဤစကားသည် သီးသန့်၊သန့်စင်၊သန့်ပြန့်၊သန့်ရှင်းသည့် ရှီအာများ နှင့်သာ ပတ်သက်နေသည် မဟုတ်ချေ။တစ်နည်းဆိုရလျှင် လိမ်လည်ပြီး အာကျယ် နေသူများ၊မိုနာဖေက်များ၊အတွင်းတစ်မျိုး၊အပြင်တစ်မျိုး ခွဲခြားသူများနှင့်လည်း ပတ် သက်နေပါသည်။
၎င်းတို့အထဲမှ ဆီးရီးယားမှ မိုနာဖေက်များမှာ အဆိုးဆုံးဖြစ်ပေသည်။၎င်းတို့မှ တဖက်တွင် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ ခေလာဖသ်ထိုင်ခုံအမှီသဟဲ ပြုထားခဲ့လေ သည်။ပြီးနောက် မိမိကိုယ်အား ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြင့် လိမ် ပြီး ပြည်သူလူထုအား မိတ်ဆက်ပေးလေသည်။အခြားတဖက်တွင် ပြဿနာ၊ပျက်စီးမှု ရာဇဝတ်မှုများ၊ပြစ်မှု၊ဒုစရိုက်မှုများကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြလေသည်။
لَعِبَتْ هاشمُ بالمُلك فلا *** خبرٌ جاء ولاوحىٌ نَزَلَ
အဓိပ္ပါယ်။။ဗနီဟာရှင်အနေဖြင့် အချုပ်အချာအာဏာကို ကစားစရာ လုပ်ခဲ့ပေသည်။ (အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် ဖက်တော်မှ)မည်သည့်သတင်းမျှ မည်သည့်ဝဟီဗျာဒိတ် တော်မျှ မကျရောက်ခဲ့ချေ။
မိုနာဖေက်(အရေခြုံ)ကိုသိမြင်နိုင်ရန် လွယ်ကူပေသည်။တစ်ဦး၊တစ်ယောက် တည်းဖြစ်ပြီး မျက်နှာနှစ်ဖက်ရှိသူဖြစ်ပြီး အသွင်နှစ်ခုကို ဆောင်ထားသူဖြစ်ပေသည်။ ဖာရစီကဗျာဆရာပြောကြားသည်မှာ-
ظاهرى چو گور كافر پر حلل *** باطنش قهر خدا عزّوجلّ
မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ ဟဒီးစ်တော်တွင် လာရှိပါသည်။
ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ كانَ مُنافِقاً وَاِنْ صامَ وَصَلّى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ: مَنْ اِذَا ائْتُمِنَ خانَ، وَمَنْ اِذا حَدَّثَ كَذِبَ، وَمَنْ اِذا وَعَدَ اَخْلَفَ
အဓိပ္ပါယ်။။အကြင်မည်သူမဆို လက္ခဏာ(၃)ခုရှိမည်ဆိုလျှင် မိုနာဖေက်ဖြစ်ပေ သည်။နမာဇ်ဖတ်သည့် သူပင်ဖြစ်ပါစေ ရိုဇာထားသူပင်ဖြစ်ပါစေ။မိမိကိုယ်ကို မွတ်စ လင်ဟုပင် ဆိုပါစေ။အကယ်၍ တစ်ဦး၊တစ်ယောက်သည် အမာတ်တစ်ခုကို အပ် ထားမည်ဆိုလျှင် ထိုအမာနတ်အား အလွဲသုံးစားပြုသည်။အကယ်၍ စကားပြောမည် ဆိုလျှင် မုသားပြောဆိုပေသည်။အကယ်၍ ကတိတစ်ခုပေးမည်ဆိုလျှင် ထိုကတိအ ပေါ် သစ္စာမရှိမည်။(မတည်မည်။)
ဤအတွက်ကြောင့် အကြင်မည်သူမဆို အရောင်နှစ်မျိုး၊အတွင်းတစ်မျိုး၊အပြင် တစ်မျိုး ရှိမည်ဆိုလျှင် အပြောနှင့်အလုပ် မညီမည်ဆိုလျှင်မိုနာဖေက်ဖြစ်ပသည်။ နေဖက်(ခ)အရေခြုံမှု၊အယောင်ဆောင်မှုဇစ်မြစ်သည် ရန်သူများအနေဖြင့် ရှုံးနှိမ့်ချိန်မှ စတင်လေသည်။ထင်ရှားပြတ်သားစွာရှေ့ထွက်လာဖို့ သတ္တိမရှိချေ။သူသည်အတွင်း၊ အတွင်းမှာသာလျှင် မိမိ၏တိုက်ခိုက်မှုများကို ပြုနိုင်ရန် အခွင့်အရေးကောင်းကို စောင့်မျှော်နေသူ ဖြစ်ပေသည်။ဗနီအိုမိုင်ယာသည် ထင်ရှားပေါ်လွင်နေဆုံး မိုနာ ဖေက်များအုပ်စုများမှ ဖြစ်ချေသည်။
မိုနာဖေက်များသည် အန္တရာယ်များအားလုံးထက် အများဆုံးဖြစ်ပေသည်။အ ကြောင်းမှာ သိပြီးသော ရန်သူများသည် မျက်နှာချင်းဆိုင် တိုက်ခိုက်လေသည်။၎င်း တို့နှင့်ရင်ဆိုင်ရန် မိုမေနီများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားထင်ရှားပေါ်လွင် သွားပေသည်။သို့ သော် မိုနာဖေက်တို့သည် အကြင်အနာ၊အယုအယကင်းမဲ့စွာ ကျောကို ဓားနှင့်ထိုး လေသည်။(အကွယ်မှ တိုက်ခိုက် လေသည်။)
ဗနီအိုမိုင်ယာသည် ခေလာဖသ် အစ္စလာမ်မီ၏ အဝတ်ကို ဝတ်ဆင်ပြီး ရိုသေ၊ လေးစားရမည့် အစ္စလာမ်အထွတ်အမြတ်အရာများကို ခြေဖြင့် နင်းခဲ့ကြလေသည်။ တစ်ခုပြီးနောက်တစ်ခုကို ဖျက်စီးခဲ့ကြလေသည်။အကယ်၍ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န) (အ.စ)၏တော်လှန်ရေး စစ်ပွဲနှင့်ကိုယ်တော်၏ ရှဟာဒသ်၊သား၊သမီးများ၊သာဝက များ ရှဟာဒသ် မရှိခဲ့မည်ဆိုလျှင် ၎င်း(မိုနာဖေက်များ)မျက်နှာကို ဖွင့်ဟပြီးသား ဖြစ် မည်မဟုတ်ချေ။ယေဘုယအားဖြင့် အစ္စလာမ် ဘာသာတွင် တစ်ခုမျှကျန်တော့မည် မဟုတ်ချေ။
ထိုနည်းတူစွာ ကူဖာမြို့သူ၊မြို့သားများ လေလုံးကြီးသူများသည် အေမာမ်ဟ စန်(အ.စ)၏ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ကို အားလုံးမှ စောဒကတက်ခဲ့ကြပေသည်။အေမာမ် ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)ထံတော်မှ တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲအတွက် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ကြပေ သည်။ဤသူများအားလုံးသည် ဂုဏ်သိက္ခာငယ်သွား၊ညိုးသွားရန် လိုအပ်ပေသည်။ ဘယ်သို့ဆိုစေ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာမှ တစ်ခုမှာ ဤတော် လှန်ရေး စစ်ပွဲဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့မျက်မှောက်ခေတ်ကာလတွင် မိုနာဖေက်များ မျက်နှာနှစ်ခုနှင့်သူများ အ ပြောတွင် တစ်မျိုး၊အလုပ်တွင်တစ်မျိုး လုပ်သူများ အရေအတွက်မနည်းချေ။အေမာမ် ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အား အချစ်ထားသူတိုင်း မလွဲမသွေ မိုနာဖေက်များနှင့် ဝေးဝေးနေ ရပေမည်။မိုနာဖေက်များ၏ နေဖာက်(အရေခြုံမှု၊ဟန်ဆောင်မှု)တွင် မမိစေရန် သတိ တရားနှင့် နေရပေမည်။ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ မဆာ အေဗ်အပေါ် မျက်ရည်ကျသူများ၊ငိုကြွေးသူများ ဖြစ်ကြပြီး၊သို့သော်အလုပ်နှင့် လက် တွေ့တွင် ကိုယ်တော်(အ.စ)နှင့် ကွာနေသည့် အဖြစ်မျိုးမဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ရပေ မည်။
ကမ္ဘာလွတ်လပ်ရေးသမားများ၏ ခေါင်းဆောင် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ တော်လှန်ရေးစစ်ပွဲသည် ထိုအချိန်အခါက မွတ်စလင်များအတွက် စမ်းသပ်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပေသည်။
ကြွေးကြော်မှုများအပြီး အနှစ်သာရ(အလုပ်နှင့်လက်တွေ့)နည်းသည် အချို့ရှီ အာများအနေဖြင့် မိမိကိုယ်မိမိ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အတွက် စတေးမည်သူဟု ခံယူထားသူများသည် မလွဲမသွေ မိမိကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်မှုယူရပေမည်။မဟာတမန် တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ကျန်ရစ်နေသည့် ဆွာဟာဗာတော်များ၊သာဝကတော်များသည် မည်သို့ဆိုစေ အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)နှင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)တို့၏ ဝိသေသန လက္ခဏာများ ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)မှ ကြားခဲ့ကြပေသည်။မည်သူမဆို ဗဒဲရရ်စစ်ပွဲ၊ အိုဟွဒ်စစ်ပွဲများတွင် ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)နှင့်အတူ ပါဝင်ဆင်နွဲဖို့ ရှဟာဒသ်ဘွဲ့ခံယူဖို့ ဆန္ဒအာသီသထားသူများအနေဖြင့် ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှု၊ကို ခံစားရလေသည်။
အို! ဝမ်းနည်းလေစွာ..!အမီရွလ်မိုမေနီးအလီ(အ.စ)နှင့်အတူ(နာကေစီး)(ကာ စေသီး(န))(မာရေကီး(န))စစ်ပွဲများတွင် စစ်ဆင်နွဲခဲ့ရလျှင် ကောင်းလေစွ…အားလုံး သောအလုံးစုံသော စာမေးပွဲ၊စမ်းသပ်မှုများတွင် ဖိတ်ခေါ်ခံခဲ့ရလျှင် ကောင်းလေစွ…
ပြီးနောက် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ တော်လှန်ရေးစစ်ပွဲသည်(မွတ်စလင် များ)အားလုံးအတွက် စမ်းသပ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။သို့သော် ဤကြီးမား၊ကြီး ကျယ်သည့် စမ်းသပ်မှုကြီးတွင် သန့်စင်၊သန့်ပြန့်သည့် နောက်လိုက်ကောင်း(အစစ် များဖြစ်သည့်)အုပ်စုငယ်လေးသာ သီးသန့်ဝင်ရောက်ပြီး၊အောင်မြင်ခဲ့ကြလေသည်။ ရွှေ၊ငွေ၊ဥစ္စာ၊ပစ္စည်း စုဆောင်းသည့်အုပ်စု ဤကြီးမားသည့် စမ်းသပ်မှုတွင် ဝင် ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြရာ မအောင်မြင်ခဲ့ကြချေ။
خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان *** تا سيه روى شود هر كه درو غشّ باشد
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သခင်အား ကရ်ဗလာသို့ မကြွမြန်းရန် တစ်ဦး၊တစ် ယောက်မှ တားမြစ်လျှောက်ထားရာ အေမာမ်(အ.စ)မှ အဖြေပေးမိန့်တော်မူလေ၏။
إذا أقَمْتُ في مَكاني فَبِما يُمْتَحَنُ هذَا الْخَلْقُ الْمَتْعُوسُ؟ وَبِماذا يُخْتَبَرُونَ؟
အဓိပ္ပါယ်။။အကယ်၍မိမိနေရာတွင် ထိုင်နေမည်ဆိုလျှင် ဤအဖန်ဆင်းခံများ ၎င်းတို့ ၏နဖူးစာ ပြန်လှည့်လာကြသူများ၏ စမ်းသပ်မှုသည် မည်သည့်အရာဖြစ်မည်နည်း? မည်သည့်နည်းဖြင့် ၎င်းတို့ကိုစမ်းသပ်ရမည်နည်း?
ဤအပြင် ဟန်ရှိပြီး၊အဆံမရှိသူများ၊မိမိကိုယ်အထင်ကြီးနေသူများ အမြောက် အများ ရှိနေခဲ့ပေသည်။တစ်ခါတစ်ရံ မိမိတို့အား အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ထံမှ ရစရာရှိ သည့် အကြွေးရှင်များဟု ထင်နေကြပေသည်။မလွဲမသွေ ၎င်းတို့အကြား ခွဲထုတ်ပြဖို့ မှတ်ကျောက် လာသင့်ပေသည်။အေသ်မမ်မေဟွဂ်ျသ်(တာဝန်ကျေပြခြင်း)မလွဲမသွေ ရှိရပေမည်။ထိုမှသာ(၎င်းတို့)မိမိတို့၏ နေရာမှန်တွင် ထိုင်နေကြပေမည်။
တစ်ခါတစ်ရံ မတ်စလဟသ်(အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သာလျှင် အကျိုးအ ကြောင်း ဘာကြောင့်ဆိုတာ သိတော်မူခြင်း)အရ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ထင်ရှားအောင် ပြုရလေသည်။ထိုမှသာ ဤအသိုင်း၊အဝိုင်းအတွင်း ဘာဖြစ်နေသည် ဆိုကြောင်းကို သိသွားစေရန် အလို့ငှာ ဖြစ်ပေသည်။
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمْ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
အဓိပ္ပါယ်။။အသင်တို့သည် စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု မခံရဘဲ ဤအတိုင်းအလွတ်ပေးခြင်းခံ ရမည်ဟု ထင်နေပါသနည်း? အမှန်တကယ် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်သည် ယခု အတိုင်း အသင်တို့အနက်မှ မည်သူများသည်ဂျေဟာဒ် ပြုသူများဖြစ်ပြီး၊၎င်းတို့သည် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် ထိုအရှင်မြတ်၏ရစူလ်(ဆွ)နှင့်မိုမေနီများကိုလွတ်ပြီးမည်သူ ကိုမျှ မိတ်ဆွေ၊အချစ်မေတ္တာမထားသူများကိုပင်မကြည့်တော်မူသေးချေ။ အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ်သခင်သည် အသင်တို့၏ လုပ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး၊ကောင်းစွာ(အ လုံးစုံ) ကိုသိမြင်တော်မူသော်အရှင်မြတ် ဖြစ်ပေသည်။
ကိုယ်တော်၏ နောင်တော်အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)အနေဖြင့် ဘာအတွက်ကြောင့် မို အာဝေယာနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ခဲ့ရပါသနည်း? ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် နောက်ဆုံးထွက် သက်အထိ၊နောက်ဆုံးသွေးစက်အထိ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ လမ်းတော်တွင် တိုက်ပွဲ၊ဆင်နွဲဖို့ အသင့်ရှိနေပါသည်ဟု စောဒကတက်ခဲ့ကြသူများအတွက် အဖြေဖြစ် ပေသည်။
သို့သော် ကရ်ဗလာအဖြစ်အပျက်နှင့် ကြုံတွေ့လာရချိန်တွင် အေမာမ်ဟိုစိုင်း (န)(အ.စ)သည် ဤဖိတ်ခေါ်သံကို ပေးတော်မူခဲ့ပေသည်။
مَنْ كانَ فِينا باذِلا مُهْجَتَهُ، مُوَطِّناً نَفْسَهُ عَلى لِقاءِ اللهِ فَلْيَرْحَلْ مَعَنا
အဓိပ္ပါယ်။။အကြင်မည်သူမဆို မိမိ၏သွေးအား ကျွန်ုပ်၏လမ်းစဉ်တွင် စတေးဖို့အ သင့်ရှိမည်၊အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်နှင့်တွေ့ဖို့(ရှဟီးဒ်အဖြစ်ခံဖို့)အသင့်ရှိမည်ဆို လျှင် ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ(အီရတ်နှင့်ကရ်ဗလာဖက်သို့)ထွက်ရပေမည်။
ထိုအချိန် ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည် လက်ပေါ်၊လက်ထပ်ပြီး၊ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ် ကောင်းသည့် ကရ်ဗလာအဖြစ်အပျက်အား ထိုင်ပြီး(ပွဲအဖြစ်)ကြည့်နေခဲ့ကြပေသည်။
ပျော့နည်း၊အားနည်း၊ပျင်းရိသူကူဖာမြို့သူ၊မြို့သားများအချို့သည် ပြင်းထန် စိတ်တက်ကြွပြီး၊အားမာန်အပြည့်ပါသည့် စာများအမြောက်အများ ရေးသားပို့သခဲ့ကြ ပါသည်။ကူဖာမြို့သို့ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အနေဖြင့် ကြွမြန်းလာပြီး အစ္စလာမ်မီ အချုပ်အချာအာဏာကို ထူထောင်ရန်ဖိတ်ခေါ် မေတ္တာရပ်ခံကြလေသည်။ကျော် ကြားသည့်ရီဝါယတ်တော်အရ ဤစာများသည်(၁၂၀၀၀)အထိရောက်သွားလေ သည်။
အကယ်၍ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အနေဖြင့် ကရ်ဗလာဖက်သို့မကြွမြန်းခဲ့ မည်ဆိုလျှင် ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းတို့သည်လည်းပဲ အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)သခင် အား ၎င်း၏သာဝကတော်များ စောဒကများ တက်ခဲ့ကြသလို အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န) (အ.စ)အားလည်းပဲ စောဒကများတက်ခဲ့ကြပေလိမ့်မည်။
သို့သော် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏တော်လှန်ရေးစစ်ပွဲသည် အားလုံးသော စောဒကတက်ချက်များကို အဆုံးသတ်စေခဲ့ပြီး အားလုံးအတူတူ မိမိတို့၏ စမ်းသပ်မှု၊ အစစ်ဆေးခံရမှုတွင် ရှိခဲ့ကြပေသည်။
ဤအေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ပြောဆိုမှုများသည် အေမာမ်ကိုအချစ်မေတ္တာ ထားသူများ၊သန့်စင်၊သန့်ရှင်းစွာ၊ကိုယ်တော်(အ.စ)ဖက်ပါသူများ နောက်လိုက်၊ နောက်ပါများအားလုံးအား မိမိတို့သည် အေမာမ်(အ.စ)၏(ရှီအာဖြစ်သည်၊မိုဟစ်ဗေ အဟ်လေဘိုက်(အ.စ)ဖြစ်သည်)ဆိုသည့် ကြွေးကြော်သံများကို သက်သေပြနိုင်ဖို့လို ကြောင်း ဂရုပြု၊သတိပြုဖို့အရေးကြီးသည် ဆိုသည့် သင်ခန်းစာကို ပေးနေပါသည်။
يا لَيْتَنا كُنّا مَعَكَ فَنَفُوزُ فَوزاً عَظيماً
(နေ့တိုင်းသည်အာရှုရာ၊မြေပထဝီတိုင်းသည် ကရ်ဗလာ)ဆိုသည့်အဆိုကို ဂရုပြုခြင်း အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကာလ၏ ကရ်ဗလာများတွင်လည်း ပါဝင်ဆင်နွဲရပေ မည်။ထို့ပြင် အာရှုရာကဲ့သို့သော် တော်လှန်ရေးများတွင် စစ်မှန်စွာ၊မှန်ကန်စွာ၊ရပ် တည် ပါဝင်ကြရမည်။သစ္စာရှိကြရပေမည်။
မည်သို့ဆိုစေ ဤစမ်းသပ်မှု၊စစ်ဆေးမှုသည် ဆက်လက်တည်ရှိနေမည် ဖြစ်ပါ သည်။ဤစမ်းသပ်မှု၊စစ်ဆေးမှုမှ မည်သူမှ ရှောင်လို့ရမည်မဟုတ်ချေ။
ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ဇေယာရတ်နာမေများ တွင် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်ထံ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)ထံဝဇီလာပြုပြီး ရှဖာအတ်(အသနားခံပေးမှု)အားတောင်းဆို ထားကြပါသည်။ဇေယာရတ်အာရှုရာ၏ နောက်ဆုံး စဂ်ျသာပြုရချိန်တွင် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်အား ချီးမွမ်းထောပနာ မှုပြုပြီး ကိုယ်တော်(အ.စ)၏ဆင်းရဲ၊ဒုက္ခများအပေါ် သည်းခံနိုင်မှုအတွက် ကျေးဇူး တင်ကြောင်း ပြောကြပါသည်။
ပြီးနောက် ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် ဖတ်ရွတ်ကြပါသည်။
أَللّهُمَّ ارْزُقْني شَفاعَةَ الْحُسَيْنِ يَومَ الْوُرُودِ
အဓိပ္ပါယ်။။အို အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် ကေယာမသ်၊ကမ္ဘာတရားစီရင်မည့်နေ့တွင် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ရှဖာအတ်(အသနားခံပေးမှု)ကို ပေးသနားတော်မူပါ။
وثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْق عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحابِ الْحُسَيْنِ الَّذينَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَيْنِ
အဓိပ္ပါယ်။။ အို အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင် ကျွန်တော်မျိုးတို့အား အေမာမ်ဟိုစိုင်း (န)(အ.စ)နှင့် ကိုယ်တော်၏သာဝကတော်များနှင့်အတူ ရပ်တည်နိုင်စွမ်းပေးသနား တော်မူပါ။ထိုသူများ(အေမာမ်(အ.စ)၏သာဝကတော်များ)သည် အရှင်၏ဟိုစိုင်း(န) (အ.စ)၏ ရှေ့တော်မှောက်တွင် မိမိတို့၏ အသက်များကို စတေးခဲ့ကြပေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ဂွန်ဗတ်တော်အောက်တွင် ဒိုအာကဗူလ်ဖြစ်ခြင်း၊ ခါကေရှဖာ(ကရ်ဗလာမြေတုံး၊မြေခဲ)မှပျောက်ကင်းမှု၊ရရှိမှု၊စသည့်အကျိုးအာနိသင် ကောင်းများသည် ကြီးမားသည့် ရှဖာအတ်တော်မှဖြစ်ပေသည်။
ဤအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရီဝါယတ်တော်များ လာရှိပေသည်။ အေမာမ် ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် နောက်ဆုံးမိမိ၏ဘိုးတော် ရစူလ်လေခိုဒါ(ဆွ)၏ရောင်ဇာ တော်အား နောက်ဆုံးဇေယာရတ်ပြုပြီး အိပ်ပျော်သွားတော်မူလေသည်။အိမ်မက် တော်အတွင်း မိမိ၏ဘိုးတော်သည် ဤဩဝါဒတော်အား ကြားတော်မူခဲ့လေသည်။
اِنَّ لَكَ فِى الْجَنَّةِ دَرَجاتٌ لاتَنالُها اِلاّ بِالشَّهادَةِ
အဓိပ္ပါယ်။။မုချဧကန် ဂျန္နတ်၊သုခဘုံတွင် အသင်၏နေရာသည်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင် မြတ်သခင်အနီးတွင် သတ်မှတ်ပြီးသား ဖြစ်ပေသည်။ထိုနေရာအား ရှဟာဒတ်(ရှ ဟီးဒ်အလုပ်ခံရမှု)မှအပ မရောက်နိုင်ချေ။မဆွတ်ခူးနိုင်ချေ။
စိတ်ချယုံကြည်စွာပြောနိုင်သည့်အချက်မှာ ဤနေရာ၏လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုမှာ ဤရှဖာအတ်(အသနားခံမှု)ဖြစ်ပေသည်။
သို့သော် ရှဖာအတ်(အသနားခံမှု)ဆိုသည့် အဓိပ္ပါယ်မှာ ကျွန်တော်အနေဖြင့် မိမိကြိုက်သည့် ဂိုနာအတိုင်းအား ကျူးကျော်မည်၊ဝါဂျစ်ဗ်အလုပ်တိုင်းကို မလုပ်ပဲနေ မည်၊ပြီးနောက် မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သခင်ထံ မေတ္တာရပ်ခံ မည်။ကိုယ်တော်အားမိမိ၏ ရှဖီးအ်(အသနားခံပေးသူ)အဖြစ် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် ထံတော်ဝယ် တောင်းခံခြင်းကိုဆိုလိုပါသလား?
မုချဧကန် ဤကဲ့သို့ မဟုတ်ချေ။မာစူမီး(အ.စ)၊အောင်လီယာအေလာဟီ(အ. စ)၊နဘီများ(အ.စ)၏ ရှဖာအတ်သည် ဂိုနာများပြုလုပ်ဖို့ မီးစွမ်းပြခြင်းကို မဆိုလိုချေ။ တစ်နည်းဆိုရလျှင် ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်ပြီး ဂိုနာများကို ထိန်းသိမ်းပေးသည့် အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
အကြောင်းသည်ကား-ကျွန်တော်အနေဖြင့် ရှဖာအတ်ကို တောင်းခံလိုချိန်တွင် အကယ်၍ တိမ်းစောင်းသွားမှု၊လွဲချော်သွားမှု ဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် မလွဲမသွေ နောက် ထပ်၊ထပ်ပြီး ဂိုနာများ မကျူးလွန်မိစေရန် သတိတရားထားရပေမည်။ထိုမှသာ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏အချစ်တော်များ(နဘီ(ဆွ)၊ရစူလ်များ(အ.စ)၊အဟ်လေ့ ဘိုက်(အ.စ)နှင့် ကျွန်တော်၏ အဆက်အသွယ် မပြတ်သွားမည်ဖြစ်ပေသည်။ဤ နည်းဖြင့် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏အချစ်တော်များကို အလွန်တရာခွင့်လွတ်တော်မူ သော၊အလွန်တရာအသနားကြင်နာတော်မူသော အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်၏ထံ ဝယ် ရှဖီးအ်(အသနားခံပေးသူ)များအဖြစ် တောင်းဆိုနိုင် လိမ့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် မဂျလစ်များတွင် တက်ရောက်ယူမည့် အချိန်တွင် ဓမ္မကထိကများထံမှ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သခင်၏ အခြေအနေများကို ကြားနာ ကြရပါသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)နှင့် ကိုယ်တော်၏အိမ်တော်သူ၊အိမ်တော်သားများ၊ သာဝကတော်များ၏ ရဲရင့်၊သတ္တိ၊ဗျတ္တိရှိမှုများ၊စတေးအနစ်နာခံမှုများ၊ရှေရ်ခ်၊ဇိုလ်မ်၊အ မှားများအား တော်လှန်ချေမှုန်းမှုတို့ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်မိမိ၏ဝိညဉ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်စေရပေမည်။ပြီးနောက် မိမိတို့၏ ကြီးမားသည့် ဦးသျှောင်၊ခေါင်းဆောင်များ၊ရ စူလ်(ဆွ)၊အာလေရစူလ်(အ.စ)တို့၏ အမိန့်တော်များကို မြေဝယ်မကျ လက်တွေ့ လိုက်နာ ကျင့်သုံးရန် စဉ်းစား၊ဆင်ခြင်ပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့အတွက် အရေးကြီးပါ သည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ခြေလှမ်းများနှင့်အညီ မိမိခြေလှမ်းကိုလည်း လှမ်း နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းရပေမည်။ကိုယ်တော်(အ.စ)၏(စစ်မှန်သည့်)အုပ်စုအတွင်း စာရင်းဝင် လာရန်ကြိုးစားရပေမည်။ဤသည်လည်း မိမိအတွက် ရှဖာအတ်၏အမျိုးအစား တစ် ခုဖြစ်သည့် ရှဖာအတ်သေသက်ဝီနီ ဆွတ်ခူးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ပြီးနောက် မြင့်မြတ်သန့်စသ်သည့် ကရ်ဗလာမြေသို့ ဇေယာရတ်ပြုရန်သွား သည့် အချိန်အခါတွင် အေမာမ်(အ.စ)နှင့် သန့်စင်၊သန့်ပြန့်သည့် သခင်၏သာဝကအ ပေါင်းအပါများ ရှဟီးဒ်ဖြစ်ခဲ့သည့် နေရာများကို အနီးကပ်ကြည့်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် လည်း မလွဲမသွေ ဤပုဂ္ဂိုလ်ထူး၊ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်များ၏ လမ်းစဉ်အတိုင်းလျှောက်လှမ်းရ မည်ဆိုသည့် တာဝန်အသိတရားကို ခံစားရယူရပေမည်။ထို့နောက် မိမိခေတ်ကာလ ၏ ယဇီးဒ်(လ.န)နောက်လိုက်များကို တော်လှန်ချေမှုန်းရပေမည်။ပြီးနောက် စစ်မှန် သည့် အစ္စလာမ်သာသနာတော်အား ရပ်တည်နိုင်ရန်၊တည်မြဲရန်၊ထိန်းသိမ်းရန်၊ စတေးလှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏သွေးတော်၊ကိုယ်တော်၏အိမ် တော်သူ၊အိမ်တော်သားများနှင့် သာဝကအပေါင်းအဖေါ်များ၏ သွေးများကိုလည်းရှင် သန်အောင် စောင့်ရှောက် ကာကွယ်ရပေမည်။
ဤအတွက်လည်း လက်တွေ့ကြိုးစားကြရပေမည်။ကိုယ်တော်(အ.စ)၏ရောင် ဇာတော်ကို ထိန်းသိမ်းရပေမည်။စော်ကားမှု၊မရိုမသေပြုမှု၊အမျိုးမျိုးမှကာကွယ်စောင့် ရှောက် ရပေမည်။ခေတ်တိုင်း၊ခေတ်တိုင်းရှိမည် ဖြစ်သည့်ရန်သူများ အရှေ့ရပ်တည် တော်လှန်ပြီး ကာကွယ်ရပေမည်။ထိုမှသာ ဟဇရတ်အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သခင် ကြီး၏ ရှဖာအတ်ခံပေးရမည့်သူများ စာရင်းတွင် စာရင်းဝင်သွားမည်ဖြစ်ပေသည်။
ကျွန်ုပ်အား ဖေးမကူညီဖို့ မည်သူအသင့် ရှိပါသနည်း? ဆိုသည့်အသံတော်အား ကျွန် တော်တို့ နားထောင်ကြပြီးلبیک))ကိုယ်တော်အတွက် အသင့်ပါဟုအဖြေပေးပြီး၊ကိုယ် တော်(အ.စ)အား ဖေးမကူညီကြရပေမည်။